ယတြာ | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ယတြာ. Show all posts
စံ – ဇာဏီဘိုရဲ့ မော်ဒန်ဗေဒင်
မိဿရာသီ (မတ် ၂၁ မှ ဧပြီ ၂၀)
ခေါင်း အေးအေးနှင့် အရာရာ အပေါ် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ရမည်။ ပေါ်ပေါက် နေသည့် အခြေအနေ အရပ်ရပ်သည် အဆိုးဘက်သို့ ဦး တည် နေသည်။ ဆက်စပ်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခေတ္တ ခွာ၍ ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန်နှင့် အရာရာ ဆောင်ရွက်ပါ။ တစ်ပိုင်း တစ်စဖြစ်နေသည့် ကိစ္စများ ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ သူတစ်ပါးက ဝေဖန်သည်များ အပေါ်အလေး အနက်ထား၍ လုပ်နေသည့် ကိစ္စများရပ်တန့်က အကျိုးမဲ့ရုံသာရှိမည်။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် ဆေးဝါးအလှူဒါနပြုပါ။
ပြိဿရာသီ (ဧပြီ ၂၁ မှ မေ ၂၁)
မိသားစုကျန်းမာရေးအညံ့ရှိမည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းအလုပ်နှစ်မျိုး လုပ်ကိုင်အောင်မြင်မည်။ စိတ်ပျံ့လွင့်နေမည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ဆုံး ဖြတ်ချက်ပေးမှုအပေါ်မူတည်၍ အလုပ်ကိစ္စဆောင်ရွက်က အလုံးစုံအဆင်ပြေမည်။ အလိုက်မသိသည့် ဧည့်သည်များကြောင့် စိတ်အနှောင့် အယှက်များဖြစ်တတ်သည်။ အစာအိမ်ဝမ်းဗိုက် ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ အမှုအခင်းများ လိုက်လံကူညီဖြေရှင်းရမည်။
ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သီးစုံပဲကုလားဟင်း ဒါနပြုပါ။
မေထုန်ရာသီ (မေ ၂၂ မှ ဇွန် ၂၁)
အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်ပြီးမှ အလုံးစုံအဆင်ပြေသွားမည်။ ဖြစ်လာသော ပြဿနာများအားအကျယ်မချဲ့ပါနှင့်။ စိတ်ဒေါသနှင့်မာနကြောင့် မလိုအပ်သောပြဿနာများ ဖြစ်တတ်သည်။ ရန်အနှောင့်အယှက်များ ရုတ်ခြည်းကြုံ၍ ရုတ်ခြည်းပပျောက်သွားမည်။ အခက်အခဲကြုံပြီးမှ လိုရာပြည့်စုံမည်။ မိသားစုအတွင်း အဓိပ္ဗာယ်မရှိဆူပူညည်းညူနေသူ တစ်ဦးကြောင့် အိမ်တွင်လာဘ်ပွင့်မည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ရေချိုးခွက်များ အသစ်လဲလှယ်သုံးစွဲပါ။
ကရကဋ်ရာသီ (ဇွန် ၂၂ မှ ဇူလိုင် ၂၂)
မမျှော်လင့်ဘဲခရီးကိစ္စကြုံမည်။ လုံးဝမလုပ်တော့ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည့် ကိစ္စများလုပ်ကိုင်ရလိမ့်မည်။ မဖြစ်နိုင်ဟုထင်ထားသည့်အရာများ ဖြစ်လာမည်။ အရာရာတလွဲတချော်ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်နေမည်။ လိုချင်သည်ဟု ပြောလျှင်မရ။ မလိုချင်ဟုပြောလျှင်ရမည်။ လုပ်လိုသည့် ဖြစ်လိုသည့် ကိစ္စများကိုစိတ်တွင် လိုလားလင့်ကစားနှုတ်မှ မလိုလားဟုပြောကအဆင်ပြေတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးအညံ့ရှိတတ်သည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္လာနေ့တွင် ကံ့ကော်ညွန့် ဘုရားလှူပါ။
သိဟ်ရာသီ (ဇူလိုင် ၂၃ မှ ဩဂုတ် ၂၃)
အလွန်ကောင်းသောကာလဖြစ်သည်။ စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာများကြုံမည်။ ရည်မှန်းထားသည်များအောင်မြင်မည်။ မိသားစုတွင်စိတ်ချမ်းသာစရာများ လက်ခံရမည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသူများအပေါ်အနိုင်ယူလွှမ်းမိုး နိုင်မည်။ မိမိအပေါ်ဒုက္ခပေးသောသူများ တစ်စတစ်စလျော့နည်းသွားမည်။ အလုပ်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ရာတွင် အချိန်ဆွဲခင်း၊ တွေဝေခြင်းမရှိသင့်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အုတ်ခဲကျိုးများစွန့်ပါ။
ကန်ရာသီ (ဩဂုတ် ၂၄ မှ စက်တင်ဘာ ၂၂)
အပြောင်းအလဲများရှိမည်။ နားနေမည်ဟု ကြံခါမှအလုပ်ပို၍ ရှုပ်သောအနေအထားရှိသည်။ ပုံမှန်လုပ်ငန်းများကိုအခါတိုင်းထက်ဆောလျင်စွာ လုပ်နေရမည်။ အများနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်သည့် အပြောင်းအလဲများနှင့် အံဝင်ခွင်ကျ အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ရပ်ဝေး လူမျိုးကွဲများနှင့် တိုက် ရိုက်ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်၍အကျိုးကောင်းရမည်။ မိမိအပေါ်အနှောင့်အယှက်ပေးသောသူများဘေးမှ ကင်းလွတ်မည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ယပ်တောင်ဟောင်းများစွန့်ပါ။
တူရာသီ (စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ အောက်တိုဘာ ၂၃)
အရာရာ သတိနှင့်ဆောင်ရွက်ပါ။ စိတ်အနှောင့်အယှက်များရှိမည်။ မိမိအပေါ်တွင် အနှောင့်အယှက်ပေးသောသူများ၏ အန္တရာယ်ကြားမှ ဘဝကိုဖြတ်သန်းရမည်။ အောင်မြင်နိုင်လင့်ကစား နှောင့်နှေးခြင်းရှိပြီး အဆင်ပြေမည်။ ဤကာလအတွင်းအတိတ်မှ ပြဿနာဟောင်းများ ပြန်လည် ပေါ်ပေါက်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်တွေ့တတ်သည်။ ငွေကြေးလက်လွယ်ခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးတတ်သည်။
ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သစ်သီးသုံးမျိုး ဆွမ်းတော်တင်ပါ။
ဗြိစ္ဆာရာသီ(အောက်တိုဘာ ၂၄ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၂)
အဘက်ဘက်မှ ကောင်းသောကာလဖြစ်သည်။ အညံ့အဆိုးများ ကျော်လွှားနိုင်မည်။ ထူးခြားသည့် အောင်မြင်မှုရရှိမည်။ စနစ်တကျစိတ်ကူး ထားပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် တိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်ရရှိမည်။ အာမခံခြင်း၊ တာဝန်ယူခြင်း များလျှော့ပါ။ အကူအညီကောင်းများပေးသည့်သူများနှင့် တွေ့မည်။ အကြီးအကဲများထံမှ ကတိစကားများရရှိမည်။ ရှေ့အလားအလာအထူးကောင်းပြီး တိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်ရရှိမည်။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် ဆန်အလှူဒါနပြုပါ။
ဓနုရာသီ (နိုဝင်ဘာ ၂၃ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၁)
ဆုံးရှုံးထားသည်များ၊ ကြန့်ကြာနေသည်များကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းများ ပြင်ဆင်ရမည်။ စိတ်ကူးအကြံဉာဏ် သစ်များကို လျင်မြန်စွာအကောင်အထည်ဖော်သင့်သည်။ အကြံတူများမှလိုက်လံ အနှောင့် အယှက်ပေးမှုကြုံမည်။ ရန်အလုံးစုံမှကင်းဝေးလွတ် မြောက်မည်။ လူမျိုးကွဲလူမျိုးခြား အကျိုးပေးမည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ပေါင်မုန့်ကြော် ဒါနပြုပါ။
မကာရရာသီ (ဒီဇင်ဘာ ၂၂ မှ ဇန်နဝါရီ ၂၀)
အဘက်ဘက်မှ ကံကောင်းခြင်း၊ အလိုရှိရာပြည့်စုံခြင်းရှိမည်။ ပစ္စည်းအပျောက်အရှများမည်။ အလွယ်တကူရသည်၊ ဖြစ်သည်ဟူ၍ မရှိ။ စိတ်ပင်ပန်းခံပြီးမှ လိုရာပြည့်မည်။ ယှဉ်ပြိုင်ထားသည်များမှ အနိုင်ရမည်။ ဇွဲကြီးခြင်း၊ မဖြစ်မနေလုပ်တတ်ခြင်း၊ လက်တွေ့ကျကျ ဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းမှ အကျိုးဆက်ကောင်းရရှိမည်။ မည်သည့်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်စေ အစပိုင်းအလွန်ခက်ခဲတတ်သည်။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် ဒန်းညွန့်ခုနစ်ညွန့် ဘုရားကပ်လှူပါ။
ကုံရာသီ (ဇန်နဝါရီ ၂၁ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈)
အရာရာသတိနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။ စိတ်အနှောင့်အယှက်များရှိနိုင်သည်။ အရှိန်မြင့်စွာဆောင်ရွက်ရင်း အနှောင့်အယှက်များကြုံရခြင်း ကြောင့် နှောင့်နှေးမည်။ ရင်းနှီးသူများနှင့် စကားများရမည်။ ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ သူတစ်ပါး ကိစ္စအတွက် ဓားစာခံသဖွယ်စိတ်ရှုပ်ရမည်။ အများ ကိစ္စ၊ အဖွဲ့အစည်းကိစ္စအတွက် အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်ခံပြီး လူမုန်းများသောအလုပ်များ ဆောင်ရွက်ရမည်။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် ထမင်းပေါင်း ဒါနပြုပါ။
မိန်ရာသီ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ မှ မတ် ၂၀)
ရန်အတိုက်အခံ များမည်။ အခက်အခဲများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည်။ စေတနာ ဝေဒနာဖြစ်တတ်သည်။ သူတစ်ပါးကြောင့် မိမိအကြံအစည် ပျက်တတ်သည်။ ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအား ချက်ချင်းဖြေရှင်းပါ။ နှောင့်နှေးခြင်းမရှိသင့်ပါ။ ငွေကြေးကံ၊ အလုပ်ကံများအထူးကောင်း သည်။ သူတစ်ပါးကိုယုံပြီး လွှဲအပ်ခြင်းထက် အရာရာကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ။ အမည်အတွင်း အ၊ဥ၊ဩ၊သ၊ဟ ပါသူများကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ပန်းအဖြူရောင်ငါးပွင့် ဘုရားကပ်လှူပါ။
From : ကုမုဒြာဂျာနယ် by စံ-ဇာဏီဘို
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, August 25, 2017 1 comment:
ကဏ္ဍ ယတြာ, ဗေဒင်
ဆရာ စံဇာဏီဘို၏ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
ဗေဒင် ပညာရှင် ဆရာ စံဇာဏီဘို၏ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်းကို ပရိတ်သတ် အတွက် တင်ဆက် လိုက်ပါသည်။
ဇွန်လ ၂၁ ရက်မှ ဇွန်လ ၂၇ ရက် အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တိုင်းတွင် စောင့်မျှော် ကြည့်ရှု နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
From : 7Day News Journal
Originally published at - https://www.facebook.com/7DayOnlineTV/videos/1478295502242147/?hc_ref=NEWSFEED
ကဏ္ဍ ရုပ်/သံ, ယတြာ, ဗေဒင်
ဆရာ စံဇာဏီဘို၏ ဇွန်လ ၁၄ ရက်မှ ၂၀ ရက် အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
ဇွန်လ ၁၄ ရက်မှ ဇွန်လ ၂၀ ရက် အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တိုင်းတွင် စောင့်မျှော် ကြည့်ရှု နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁၃၇၉) ခုနှစ် (၁) နှစ်စာ ဗေဒင်ပေါင်းချုပ်
တနင်္ဂနွေနေ့ ဖွားတို့ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
တနင်္ဂနွေ နေ့ဖွားတွေ အားလုံး နီးနီး အတွက် ဒီနှစ်သစ်ကတော့ ……လူချစ် လူခင် များမယ့်နှစ် တစ်နှစ်ပါပဲ။
တနည်းအားဖြင့် စန်းပွင့်မယ့်နှစ် တစ်နှစ်လို့ ဆိုကြပါစို့။
အလုပ်အကိုင် နှင့် စီးပွားရေး
မနှစ်က ရှာရဖွေရ…ခက်ခဲ့သမျှ….လွယ်လွယ်နဲ့ မရခဲ့သမျှ…၊ ဒီတစ်နှစ်တော့ ..ရေကန် အသင့် ကြာအသင့် အနေ အထားလေး တွေလည်း ပါလာနိုင်ပါတယ်။ ဘေးကျပ် နံကျပ် အခြေအနေ အနဲငယ် ကြုံနိုင်ပေမယ့်….အသက်မွေးမှုမှာ ကူညီပေးမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ပေါ်လာတတ်ချိန်ပါ။
ဒီတစ်နှစ်ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်က….နဲနဲ ပေါ့လျော့ နေမိ တတ်ပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေလို….ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ကြိုးစားလို့ သိပ်မရဘဲ…အပျော်အပါး ဘက်ပဲ ဖြစ်စေ…၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လွတ်လွတ် လပ်လပ်ပဲ ဖြစ်စေ…၊ ဘာမှ သိပ်လေးလေး နက်နက် လုပ်လို့ မရဘဲ ဖြစ်စေ… ဖြစ်နေ တတ်ပါတယ်။
အလေးအနက်ကြီးထားပြီး လုပ်ပြန်တော့လည်း …လုပ်သမျှက လမ်းတစ်ဝက်မှာ ပဲ ….အကြံပြတ် သွားတတ် ပါတယ်။
ဆိုတော့ ဒီတစ်နှစ်ကတော့….အရိပ် အခြေကြည့်ပြီး…ကောင်းတဲ့ ကံလေး ပေါ်လာချိန်မှာ မျောလိုက် နေရမယ့် နှစ်မျိုး ဆန်ပါလိမ့်မယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မနှစ်ကနဲ့ စာရင်တော့ …ဒီတစ်နှစ်ဟာ ..အများစုသော တနင်္ဂနွေ နေ့ဖွားတွေ အတွက် …သက်တောင့် သက်သာ ပိုမို ရှိကြ ပါလိမ့်မယ်။
ချစ်မှုရေးရာ နှင့် အိမ်ထောင်ရေး
အသည်းစွဲအောင် ချစ်မိလောက်စရာ ပေါ်လာ တတ်သော နှစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
လူပျို အပျိုတို့အဖို့….အချစ်ကို လက်တဲ့မစမ်းမိလိုက်နဲ့….တစ်ကယ်မြတ်နိုးမိ…စွဲမိစေမယ့် အချစ်မျိုး ကြုံသွားနိုင်တဲ့ နှစ်ပါ။ အလိုလိုနေရင်း တစ်စိမ့်စိမ့် ချစ်မိ….လိုလား တပ်မက် မိစေမယ့် …..အချစ်နတ်သမီး ဗီးနပ်စ်ရဲ့ ညို့ကြိုးမိနေတဲ့ နှစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်သည်တွေ အဖို့ကတော့…..ချစ်ဒုက္ခကို ပိုမို ခံစားရနိုင်ကိန်း ရှိပါတယ်။ အကြောင်းအား လျော်စွာ ချစ်လျက်နဲ့ ခွဲနေရခြင်း မျိုးလေးတွေ သော်လည်းကောင်း ပေါ်ပေါက် လာတတ် ချိန်ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ပိုင်းဝေးကွာရမှု အခိုက် အတန့်ကို သီးခံနိုင် ကြဖို့ လိုပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဝေးကွာ သွားရမှု ..စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင် အချင်းများရမှု တွေထက် စာရင်…..အများကြီး သက်သာလို့ပါပဲ။
ပညာသင်ကြားခွင့်ကံ တွေ ပွင့်လန်းနေတဲ့ ကာလ တစ်ခုပါ။ ပညာ သင်ယူခွင့်တွေ အလိုလို ရရှိနေတတ် ပါတယ်။ အတန်း ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်…ပြင်ပ သင်တန်းတွေ ပဲဖြစ်ဖြစ် …အလိုလို တက်ခွင့် သင့်ခွင့်တွေ ကျရောက် လာပါမယ်။ ပညာရေး ကံ အားသာသည့် နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးများ …သားအိမ် နှင့် ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေ…မွေးလမ်းကြောင်းနဲ့ .. မအင်္ဂါ ဆိုင်ရာ ရောဂါဘယ အသေးစား မျိုးတို့ ဖြစ်စေ…ကပ်ငြိ လွယ်တတ်သော ကာလပါ။ အထူးသဖြင့် ..ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ တို့မှာ ပိုမို ဂရုစိုက်ကြ ရပါမယ်။ ဆေးဝါး အစားအစာ တစ်မျိုးမျိုးရဲ့ ဘေးထွက် အာနိသင်ကြောင့် ဖြစ်စေ အဆိုပါ ဥပါဒ်မျိုးကို ကြုံတွေ့ ရတတ်ကြ တာကိုလည်း …သတိပြုရပါမယ်။
ကျားမ မရွေး ..အသည်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း …ရောဂါဘယ အနဲငယ် ဖြစ်ပွားစေလွယ်သော ကာလဖြစ်ပါတယ်။
ပျော်သလို နေပါကွယ့် ဆိုတဲ့ ကာလပါ။ ခရီးယာယီတွေ ပေါပါမယ်။ ကြားသုံးကြား…..တင်မက….၊ ကြားမှန်သမျှ အကုန် ၀င်ပါနေ ရပါမယ်။
ဟိုကြားထဲ ပါလိုက်ရ…သည်ကြားထဲ ၀င်လိုက်ရ နဲ့…..ကိုကိုကြား၊ မမကြားတွေတောင် …ဖြစ်ရတတ်တဲ့ နှစ်မျိုးပါ။
ဆိုတော့….ဒီတစ်နှစ် မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားတွေ အဖို့….ကြားဝင် ဆောင်ရွက် ပေးရသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများနဲ့ အသက်မွေး မယ်ဆိုရင် …အလွန်ကောင်း ပါသဗျာ။
လူပေါင်းများစွာဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားတွေကို မြင်လိုက် တာနဲ့ကို ကြားခံအဖြစ် အသုံးပြု…အကျိုးဆောင်ပေးရန်…တောင်းဆိုမှု ပြုလာတတ်ပါတယ်။
လောကီအာရုံ ကာမဂုဏ်က ဖျားယောင်း လာမယ့် နှစ်တစ်နှစ်ပါ။
အင်မတန် အိမ်တွင်းပုံးပြီး ရိုးရိုးကုပ်ကုပ် နေတတ်သူတွေတောင်….ဒီတစ်နှစ်တော့ သောကြာဂြိုဟ်ရဲ့ ဖျားယောင်းမှုကြောင့်….ဆန်းဆန်းပြားပြား သရိုး သရီ.. ခံစားမှုတွေ သက်ရောက် လာစေ တတ်ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားတွေ အတွက် ဒီတစ်နှစ် အကျိုးအပေးနိုင်ဆုံး ဂြိုဟ်ကတော့ ကြာသာပတေးဂြိုဟ် ဖြစ်ပြီး…..ဆိုးကျိုး အပြုနိုင်ဆုံး ဂြိုဟ်ကတော့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်နီးနားချင်းတွေ … အခန်းနီးနားချင်းတွေ …. စသော အနီးအစပ် ပတ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့ သဟဇာတဖြစ်မှု နဲပါးရတတ်ခြင်း သော်လည်းကောင်း…သို့မဟုတ်/
ထို အနီးနား ချင်းတွေ ပျက်ဆီး ထိခိုက်ခြင်းများ ကိုသော်လည်းကောင်း… မြင်ရတွေ့ရမယ့် ကာလ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အနီရဲရဲအရောင် နဲ့ အရှေ့တောင် စူးစူးအရပ် တို့ကို အဓိက ရှောင်ကျဉ် သင့်ပါတယ်။
ဒုတိယအားဖြင့်ကတော့ အနက်ရောင် နဲ့ အနောက်တောင့်အရပ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
နံ့သာရောင် နဲ့ ၀ါညိုရောင် ကတော့ အကျိုးပေး အရောင်ဖြစ်ပြီး…အနောက်စူးစူး အရပ်ကနေ အကျိုးပေး တတ်ပါတယ်။
ငွေသားစစ်စစ် ဖလားလေးတစ်ခုကို ဧည့်ခန်း မှာ ထားသင့်သော နှစ်ကောင်း မွန်မြတ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
တနင်္ဂနွေနေ့ဖွား များ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာခြင်း …၊ လောကီအကျိုးစီးပွား ….လောကုတ္တရာ အကျိုးစီးပွား နှစ်ဖြာသော အကျိုး တိုးတက်နိုင်ကြခြင်း ရှိကြသည် ဖြစ်ကြ ပါစေသတည်း။
တနင်္လာနေ့ ဖွားတို့ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
တနင်္လာနေ့ဖွားတွေ အများစု အတွက် … သည်တစ်နှစ်သည် … ဘာပဲပြောပြော….အမောပြေနိုင်မယ့် နှစ်တစ်နှစ်ပါ။
မနှစ်က တုန်းက တနင်္လာနေ့ ဖွားတွေ….အနိမ်ခံရ၊ အပယ်ခံရ၊ အမုန်းခံရ…များခဲ့သမျှ…..ဒီတစ်နှစ်တော့…. ချစ်ခင် ကူညီ မယ့်သူ ….. aထာက်ပံ့ ပေးမယ့်သူ တွေ ပေါလာ တတ်ချိန်ပါ။
အကျိုးစီးပွား ရှာဖွေရရှိရေးမှာ….တစ်ခုတော့ အခက်တွေ့ကြပါမယ်။ ဘာလဲဆိုတော့…ခါတိုင်းလို…လွယ်လွယ် နီးနီး က နေ ရှာဖွေလို့မရတတ်ဘဲ… ဝေးဝေးကနေ….အနဲငယ်ခဲရာခဲစစ် ကြိုးစားရှာရမယ့်အချိန်ပါ။ တနည်းအားဖြင့် စိတ်ရှည်မှုသည် …သည်တစ်နှစ်အတွက် …အကျိုးစီးပွားရှာဖွေ ရရှိရေးမှာ အလွန် အရေးကြီးပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ၀န်ထမ်းတွေဆို…..နယ်ဘက်၊ အစွန်အဖျားကျသောဒေသများ၊ ပုံမှန်လုပ်နေကြ ဌာနမျိုးမဟုတ်သော … လုပ်ငန်းမျိုး မဟုတ်သော… လုပ်ငန်း တာဝန်များ ….နေရာဒေသများကို ပြောင်းရွှေ့ကြရတတ်ချိန်မျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။
သို့သော် …မိမိတို့ကို နောက်ကနေ ကျောထောက်နောက်ခံပေးမယ့်….
ဘက်ဂရောင်းကောင်းကောင်းတွေ ရတတ်သော အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်လို့ခင်လို့ နေရာပေးခံရတတ်သော ကံကောင်းမှုမျိုး ကြုံရတတ်ချိန်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
မေတ္တာရေး အချစ်ရေး…ကပြောင်းကပြန် အပြောင်းအလည်းတွေ ကျရောက်လွယ်တတ်သော ကာလဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ပျိုရွယ်သူ လူပျိုအပျို ..လူလွတ်တွေအဖို့ သမီးရည်းစားရေးရာ ကဏ္ဍ မှာ အပြောင်း အလည်း တွေ ဖြစ်လွယ် တတ်ချိန်ပါ။
နောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာတာနဲ့ …ပထမတစ်ဦးနဲ့ ..ပြသနာဖြစ်လွယ်သော အချိန်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ …ဒီနှစ်မျိုးသည် မုန့်စားရင်း လှည်းစီး … ငါးရံနှစ်ကောင် သေသေ ၀ပ်ဝပ်နဲ့ တစ်ပြိုက်နက် ဖမ်းလို့ ရနိုင်သော ကာလမျိုး မဟုတ်ပါ။
ဒုတိယတစ်ယောက် ချဉ်းကပ်လာတာနဲ့ ပထမတစ်ယောက်နဲ့ ပြသနာ…တက်နိုင်ဖို့ သေချာနေသော ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် နာမည်အဖျားစာလုံး…(အဆုံးစာလုံး) စနေနံဖြင့်မှည့်ခေါ်ထားသော အမည်ပိုင်ရှင်များ…၊ ဥပမာ…ကျော်ကျော်ထွန်း၊ ကျော်ဇင်ထွန်း၊ ချစ်နှင်းနွယ်၊ စန်းစန်းထွေး..စသည်။
စသည်ဖြင့်သော အမည်ရှင်မျိုးတွေမှာ…မေတ္တာရေး အပြောင်းအလည်း ကဏ္ဍ ဖြစ်ပွားရန် လွယ်ကူနေသော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
အနက်ရောင်သည်…ယခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးအတွက် မေတ္တာရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေးကို အနှောက်အယှက် ပြုနိုင်သော အရောင်ဖြစ်တာမို့ ..တစ်နှစ်လုံးအထူးရှောင်ကျဉ်သင့်လှပါတယ်။
ဆရာသမားတွေနဲ့ ပညာရှင် ဆိုသူတွေနဲ့….အတိုက်အခံ ဖြစ်လွယ်သော ကာလပါ။ သတိပြုပါမယ်။
သင်တန်းတွေ၊ သင်ကြားခွင့်ကံတွေ ဘ-က်မှာတော့ ကောင်းလှပါတယ်။
ကိုယ်ဘယ်လောက်ကြိုးစားသည်ဖြစ်စေ ရသင့် သလောက် ဂုဏ်ထူး ဘွဲထူး ရနိုင်ဖို့တော့ ခက်ခဲ တတ်ပါတယ်။ ဒူးလောက် တင်မှ ရင်လောက် ကျမယ့်ကာလ တစ်ခုပါ။
ပညာရေးကဏ္ဍမှာလည်း ကိုယ်ထင်ထားတာတစ်ချို့နဲ့ တက်တက်စင်အောင် လွဲချော်ရတတ်မှုတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။
သင့်အဆင့်မျှသာ သဘောထားရမယ့် ကာလ ဆိုကြပါစို့။
လေဖြတ်ခြင်း …လေဖြန်းခြင်း အနဲငယ်ဂရုစိုက်အပ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်။
ခါတိုင်းလိုမဟုတ်ပဲ…ကျန်းမာရေး အနဲငယ် အကဲဆတ်ချင်တဲ့ ကာလပါ။
အရေပြား၊ လေရှုပြွန် နဲ့ အဆုတ်ဝေဒနာများ၊ အာရုံကြောများ ပင်ပန်းနွမ်းခြင်း များ ဒဏ် ခံရလွယ်တတ်ချိန်ပါ။
အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များသည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်ကျဆင်းလွယ်နေစေတတ်ပါတယ်။
နေရာပေးခံရမှုတွေကို ဂရုစိုက်ပါ။ ရလာတဲ့ အခွင့်အလမ်းပေါ်မှာ…အကျိုးရှိအောင် အသုံးချတတ်ရပါမယ်။
ရရှိလာနိုင်တဲ့ နေရာပေးခံရမှု….အထောက်ပံ့ကောင်း စသည်တို့သည် ချစ်ခင်ရင်းစွဲ အပေါ်မူတည်ပြီး ….ရရှိလာနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် နာမည်အဖျားစာလုံး သောကြာနံ ဖြင့် မှည်ခေါ်ထားသော
ဥပမာအားဖြင့် …ကျော်ကျော်သိန်း၊ ခင်စန္ဒာသော်၊ မျိုးမျိုးသွင်၊ စန်းသီတာသော်၊ စသည်ဖြင့်သော အမည်ရှင်မျိုးတွေမှာ မုချ အခွင့်အလမ်းကောင်း၊ အထောက် အပံ့ကောင်း၊ နေရာကောင်း ရလွယ်နေပါလိမ့်မယ်။
အကျိုးခံစားရလွယ်သော ကာလပါ။ မရှာဘဲရတဲ့အကျိုးမျုိူးက ပိုမိုထက်သန်နေပါမယ်။ ကိုယ်ရှာဖွေလိုက်တာမျိုးကျတော့ အခက်အခဲနဲ့ စိတ်ရှည်သီးခံရမှုတွေ ပါဝင်နေပါမယ်။
အရမ်းစူးစိုက်မိနေတဲ့ …အာရုံစူးစိုက်မှုတွေကြောင့် …အာရုံကြောပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရတတ်ပါတယ်။
လူလိမ်လူကောက် ရန်ကို လည်း သတိထားအပ်သော အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြွေးမြီကဏ္ဍတွေကို လည်း သတိထားပြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ့်ကာလပါ။
ချေးငှားလို့ လွယ်သလို…ကြွေးအမြောက်အများလည်း တင်လွယ်နေတတ်ပါတယ်။
တင်ပြီးသွားရင်လည်း…..ဗွက်ပေါက်မသွားအောင် ထိမ်းနိုင်ဖို့ ခက်တဲ့ကာလပါ။
ဒါကြောင့် လွယ်လွယ်ချေးငှားရတိုင်း မလိုအပ်ဘဲ..အကြွေးမယူမိဖို့လိုပါတယ်။
ခါတိုင်းနှစ်တွေလို…ဆူလွယ်နပ်လွယ် အကျိုးစီးပွားမျိုး မျှော်မှန်းခွင့် လုံးဝမရှိသည့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်နှစ်အတွက် တနင်္လာနေ့ဖွားတွေအဖို့ …
ဆိုးကျိုးအပေးနိုင်ဆုံးဂြိုဟ်သည် ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု ဖြစ်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်အမျိုးမျိုးကို သတိပြုပြီးသုံးစွဲအပ်သလို…အနောက်မြောက်အရပ်ဒေသကိုလည်း အသွားအလာ ဆင်ခြင်ရမယ့် အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
သောကြာဂြိုဟ်ကတော့ တစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံး အကျိုးပေးအား အကောင်းဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်မှာ ဖြစ်လို့……
ခရမ်းပြာရောင် သည် ..ကံကောင်းစေတတ်သော အရောင်ဖြစ်သလို…
မြောက်စူးစူးအရပ်သည်လည်း လာဘ်လာဘနဲ့ အထောက်အပံ့ကောင်းကို ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
အားကောင်းသော သံလိုက်တုံးလေး တစ်တုံးကို ခရမ်းပြာရောင် ကတ္တီပါစလေးနဲ့ ထုပ်ပြီး ဆောင်ထားသင့်လှပါတယ်ခင်ဗျား။
တနင်္လာနေ့ဖွားများ အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ..ကျန်းမာချမ်းသာပြီး လောကီအကျိုးစီးပွား…လောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွား နှစ်ဖြာကို မျှတစွာ ရရှိနိုင်ကြ သည်ဖြစ်သော နှစ်ကောင်းနှစ်မြတ်တစ်ခု အဖြစ် ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေသတည်း။
အင်္ဂါနေ့ ဖွားတို့ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
ဒီတစ်နှစ်ကတော့ အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေ….ရုန်းရ ကန်ရ…ပင်ပန်းရမယ့်နှစ်ပါပဲ။
လူတွေကလည်း ကိုယ့်ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ကို ဘာခိုင်းရမလဲ၊ ဘာအကျိုးဆောင်ခိုင်းရမလဲ။ ဘယ်လိုနင်းလိုက်ရမလဲ…တွေးထင်…မြင်ယောင်မိနေကြမယ့်နှစ်ပါပဲ။
မာနတွေကို ခ၀ါချနိုင်သလောက် ချပြီး…အခမဲ့အကျိုးဆောင်မှုတွေ ဖောဖောသီသီသာ လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ပြင်ထားကြပေတော့ခင်ဗျား။
အလုပ်တစ်ခုလုပ်လက်စ မပြီးသေးမှီ ..နောက်တစ်ခုကို ပြောင်းလုပ် လိုက်ရ တတ်သော နှစ်မျိုးပါ။ ဟိုဟာလည်း မပြီးသေး…၊ သည်ဟာလည်း အဆုံးထိ မရောက် …တောင်ပြေး လုပ်လိုက်ရ…မြောက်ပြေး လုပ်လိုက်ရ ဖြစ်တတ်သော နှစ်မျိုးလို့ ဆိုပါစို့။
အလုပ်မဆိုးပါ။ အလုပ်တွေ ကို အပြိုင်အဆိုင် အတိုက်အခံ များလာသည်အထိကို …လုပ်နေရတတ်ပါသေးတယ်။
ဒီတစ်နှစ်ထူးခြားတာက…အကျိုးစီးပွား ရှာဖွေရေးမှန်သမျှမှာ..အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေအဖို့…အပြိုင်အဆိုင် ကင်းသည်ဟူ ပြီးမရှိသလောက် … ကို…. ရန်သူ ပြိုင်ဘက်တွေ များလာနိုင်ခြင်းပါပဲ။
ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်နဲ့ စီးပွားရေးမှာ…ကောင်းနေပါစေဦး..အခမဲ့အကျိုးဆောင်ပေးမှုလေးတွေလည်း ..လုပ်ကိုလုပ်ပေးသင့်တဲ့နှစ်မျိုးပါ။ မလုပ်ပေးမိရင်တော့….ရည်ရွယ်ချက်တစ်ချို့ ပျက်ရတာတွေ၊ ဆုံးရှုံးရတာလေးတွေလည်း တွဲပါလာပါလိမ့်မယ်။
ချစ်မှုရေးရာ…မှာ ပွေလီလွယ်တတ်သော ကာလမျိုးပါ။ မုန့်စားရင်းလှည်းစီး..ငါးရံနှစ်ကောင်ဖမ်း ဇာတ်လမ်း မျိုးလေးတွေ ကြုံလွယ် ဖြစ်လွယ်သော ကာလလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တိတ်တိတ်ပုန်း ဇာတ်လမ်းမှာ …မင်းသား မင်းသမီး ဖြစ်လိုက် တာနဲ့ ရှေ့လာမယ့် ၁၃၈၀ နှစ်ထဲမှာ မေတ္တာရေး ကမောက်ကမ ဖြစ်ဖို့ အတွက် စရံသပ် လိုက် သလိုပဲ သေချာ သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်နှစ် လုပ်မိမယ့် အမှားတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရလာဒ်ကို…နောက်တစ်နှစ် ၁၃၈၀ မှာ အဖြေပြန်ထွက် သွားမှာ ဖြစ် ပါတယ်။
လူပျိုအပျိုတွေ မှာ ..ချစ်မှု ရေးရာကဏ္ဍ မှာ ရွေးရခက်စရာအခြေအနေတွေ ပေါ်ပေါက်နိုင်သလို…..
အိမ်ထောင်သည် တွေ အဖို့…ပိုတောင်ဂရုစိုက်ရပါလိမ့်မယ်။
မူလဇာတာမှာ အိမ်ထောင်ရေးကံ ကြံ့ခိုင်သူအဖို့ ဒီတစ်နှစ်သည် ပြသနာမရှိပေမယ့်…၊ မူလဇာတာမှာကတည်းက အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ချစ်မှုပွေတတ်သော ကံပါလာသူများအဖို့ကတော့…သည်တစ်နှစ်မှာ မုချ ကြိတ်ကြိတ်..တိုးတိုး..လျှို့ဝှက်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။
မူလဇာတာ ကြံ့ခိုင်သူတွေမှာတော့….အိမ်ထောင်ဘက်ဖြစ်သူ ခရီးယာယီများပြားခြင်း မျိုး ဖြစ်လာတာကို ထူးခြားမှု ကြုံလာရတတ်ပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော သည်တစ်နှစ်ကတော့ အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေအဖို့ အချစ် အတက် ထွက်လွယ်စေသော နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။
မနှစ်က ပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာတွေမှာ အခက်အခဲ များခဲ့သမျှ…ဒီတစ်နှစ် ပြန်လည်ပြီး အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါပြီ။
သင်တန်းကောင်းတွေ၊ ကောင်းသောသင်ကြားခွင့်တွေ ပြန်လည်ရရှိတတ်သော ကာလပါ။
မထင်မှတ်ဘဲ…ပညာရှင်များရဲ့ ပံ့ပိုးမှုကိုလည်း ရလွယ်သော ကာလဖြစ်ပါတယ်။
အလွန် ကျဆင်း လွယ်သော နှစ်ပါ။ တစ်နှစ်လုံး…သတိကပ်ထားမှ တော်ရုံ ကျမယ့်နှစ်ပါ။
အလိုလိုခွန်အားဆုတ်ယုတ်နေတတ်ခြင်း၊ အဆုတ် နှင့် လေရှုပြွန်ဥပါဒ်၊ ၀မ်းရင် ဥပါဒ်ပေးခြင်း၊ လေကြောင့် ဥပါဒ်ပေးခြင်း၊ အာရုံကြော ပင်ပန်းနွမ်းနယ် တတ်ခြင်းတွေ..အထူး ဂရုစိုက်မယ့်နှစ်မျိုးပါ။
နဂိုကတည်းက အတက်ရောဂါ ရှိသူတွေ ဒီနှစ်မုချ …ရောဂါလက္ခဏာ ပြန်ပေါ်လာပါမယ်။ သတိပြုရပါလိမ့်မယ်။
လူတွေက ကိုယ့်ကို မြင်တာနဲ့ ခိုင်းချင် လာပါမယ်။ လုပ်ပေးနိုင်တာ ဆိုရင် .. အခမဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် …စေတနာ့ ၀န်ထမ်း လုပ်ပေး လိုက်သင့်သော နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
သူတစ်ပါး အကျိုးဆောင်မှ…ကိုယ့်အကျိုးအောင်မယ့် …အရှင်းဆုံး ဥပမာနဲ့ ကိုက်ညီနေသော နှစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
အတ္တဟိတ အကျိုးစီးပွားအတွက် ရှေးရှုလိုက်တိုင်းမှာတော့…..နေရာတိုင်းမှာ အပြိုင်အဆိုင်ပါလာပါမယ်။
လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောနဲ့ သာသနာ့ဘောင်က ရဟန်းတွေမှာတောင် ..အင်္ဂါနေ့ဖွားရဟန်းတော်များအဖို့ လောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွား ရှာဖွေရာမှာ… အနှောက် အယှက် ရန် မကင်းဘဲ ဖြစ်ရ တတ်ချိန်ပါ။ (လေ့လာကြည့်ပါ)။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖို့…ဒီတစ်နှစ်မှာ အမျှကုသိုလ်များများဝေပါ။ ဘာကောင်းမှုပဲ ပြုမိသည်ဖြစ်စေ…မမေ့မလျော့အမျှဝေပေးပါ။
ပရလောကမှ …လိုအပ်နေသူအချို့ က…မိမိတို့ဆီမှ အမျှပေးမှုကို မျှော်လင့်နေတတ်သော နှစ်မျိုး ဖြစ်လို့ပါပဲ။
ဒီတစ်နှစ်…မှာ…လိုအပ်ရင် အနားယူပါ။ လောဘမကြီးပါနဲ့။
ကိုယ်တိုင်က ….နားချိန်မပေးရင်…၊ သဘာဝတရားက ကိုယ့်ကို နားပစ်ပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်ကနေ ခွင့်ယူ သင့်ရင်ယူပါ။ (ခွင့်ရက်ရှည် အထိ ယူပစ်ပါ။)
ဒီနေရာမှာ ဖြုန်း ဆိုတာကို ဘာကြောင့် သုံးရသလဲ ဆိုတော့…အချိန်တစ်ချို့ မုချလေလွင့် ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ နှစ်မျိုးဖြစ်လို့ပါပဲ။
ဆိုတော့…လွတ်ကျမှာနဲ့ စာရင် သေချာ စနစ်တစ်ကျ လွှတ်ချပါ။
အချိန်ဖြုန်းရာမှာ….မိမိသူတစ်ပါး မထိခိုက်စေမယ့်နည်းနဲ့….အများအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေမယ့်နည်းနဲ့ ဖြုန်းလိုက်ပါ။
ကိုယ်ပိုင်အချိန်တစ်ချို့ ဆုံးရှုံးသွားပေမယ့် အများအတွက် အကျိုးဖြစ်ေ်စမယ်ဆိုရင်…ဒီတစ်နှစ်မှာ ကြုံလာနိုင်တဲ့…မျှော်လင့်ထားသမျှတက်တက်စင်အောင် လွဲကုန်တတ်ခြင်း ကံကို…..မုချ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီတစ်နှစ်က အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေအတွက် အပယ်ခံနှစ်၊ အနင်းခံနှစ်၊ အမုန်းခံနှစ် လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ကျိုး စီးပွားကို ရှေ့တန်း တင်လေလေ……..ထိုကံမျိုး တည့်တည့် သင့်လာ တတ်လေလေပါပဲ။
ပရဟိတ အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှုမယ်ဆိုရင်တော့…..လွန်ကဲလှစွာ နဲ့ပဲ……နွံထဲက ကြာပမာ…..ပြန်လည်တင့်တည်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ဒီတစ်နှစ် အားအရလောက်ဆုံး အကျိုးပြုသည့်ဘက်ကို ပါလာနိုင်တဲ့ ဂြိုဟ်ကောင်းကတော့ ကြာသာပတေးဂြိုဟ် (ဘုမ္မိ) ဂြိုဟ်ပါ။
အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေ အတွက် မူလတြိရန်း မို့ အကျိုးပေးအား မသန့်ရှင်းသည့်တိုင်အောင် ….ဒီတစ်နှစ်အဖို့ တော့ …သူသည် အတန်အသင့် အကျိုးပြုလာပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် နံ့သာရောင် ၊ ၀ါညိုရောင်တို့ကို အသုံးပြုနိုင်သလို..၊ အဖြူရောင်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မင်္ဂလာမောင်မယ် တို့ မှာ အဖြူရောင်သည် အင်္ဂါနေ့ဖွားတွေအတွက် ..သည်တစ်နှစ်အဖို့ ..မင်္ဂလာကျက်သရေ တည်နေတဲ့အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ထီထိုးမယ်ဆိုရင် ကြာသာပတေးနေ့မှာ ထိုးပါ။ ၅၊ ၂၊ ၉ ဂဏန်းများ အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဗုဒ္ဓဟူး / ရာဟုဖွားတို့ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
ဗုဒ္ဓဟူး နဲ့ ရာဟု ဖွားတို့သည်…တူသယောင်ယောင်နဲ့ ကွဲလွဲသော အကျိုးပေးကံတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် … လက်ဝင်ပေမယ့် .. ရသလောက်တော့ …ကြိုးစား ခွဲခြားပြီး ရေးပေး သွားပါ့မယ် ခင်ဗျာ။
ဒီတစ်နှစ်မှာ ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟုသည် အဓိပတိဌာနမှာ ရပ်တည်ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးအနေနဲ့ သာမာန်ရပ်တည်မှုမျိုး ဖြစ်သော်လည်း …ရာဟု အနေနဲ့ ကတော့.. မဟာဘုတ် ဥစ်ဂြိုဟ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာ ဗုဒ္ဓဟူး / ရာဟု ဖွား ဇာတာရှင်တွေသည်….စွမ်းဆောင်ရည် ပေါ်လွင်လာမယ့် အနေ အထား ရရှိလာပါတယ်။
နောက်ကွယ်ကနေ နေချင်သူအချို့တောင်….မနေသာပဲ ရှေ့ထွက်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် ပြကြရမယ့်နှစ်မျိုးပါပဲ။
အကျိုးစီးပွား အင်မတန် ရှာရဖွေရလွယ်ကူလာစေတတ်တဲ့ နှစ်မျိုးပါ။ ပညာပဲရှာရှာ..၊ စီးပွားပဲရှာရှာ ၊ လောကီ အကျိုး စီးပွား၊ လောကုတ္တရာ အကျိုးစီးပွား ဘာပဲရှာရှာ …ရလွယ်…နီးစပ်သော နှစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားများအနေနဲ့…နီးစပ်ရာ ..အနီးအနားမှ မိတ်ေ်ဆွများ နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းလွယ်ကူပါမယ်။
ရာဟုဖွားများအနေနဲ့ကတော့….တစ်ကြိမ်နဲ့ ကြိုးစားလို့ မရခဲ့သေးသည့် အချို့သော ကဏ္ဍများကို ဒီတစ်နှစ်ထဲမှာ ပြန်လည်ကြိုးစားရယူနိုင်ခြင်း ရှိလာ တတ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ..ပြန်လည် ကြိုးစားအားထုတ် အောင်မြင်နိုင်သော ကံအခြေအနေ ရောက်ရှိနေချိန်ပါ။
ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည် တက်လာသည့်အခြေအနေနဲ့ ..အကျိုးစီးပွား ရှာလာဖွေလွယ် ကံကောင်းလွယ်တတ်သော အခြေအနေ နှစ်ရပ် မှာ….မူလဇာတာ နဲ့ ရောက်ဆဲအသက်ပိုင်း အရ…အားသာချက်သာ ရှိနေမယ်ဆိုရင်…သည်တစ်နှစ်သည်…ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟုတို့အတွက်
သို့သော်……………….စပ်တူအစုစပ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အတော့်အတော်လေးကို ဂရုစိုက်ပြီးမှ …..ပြုပါခင်ဗျာ။ အစုရှယ်ယာကဏ္ဍတွေမှာ ဆိုးကျိုးပေးနိုင်သော နှစ်မျိုးဖြစ်လို့ပါပဲ။
လူပျိုအပျိုများအဖို့ ဖူးစာရေးနတ် မျက်နှာသာ ပေးတတ်ချိန်ပါ။ မိမိစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ …ဖူးစာဖက်မျိုးကို ကံတရားက ဖေးမပေး ..တွေ့ဆုံပေး လာတတ်သော ကာလမို့….အချို့သော ဗုဒ္ဓဟူး / ရာဟု တို့အတွက် သည်တစ်နှစ် ကတော့….အချောအလှ..အယဉ် ..ငယ်ငယ်ချောချော (သို့) စိတ်တိုင်းကျ ..ဖူးစာဖက်မျိုးနဲ့ အတွဲလေး ချိတ်မိနိုင်ပါသေး။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားများအဖို့….အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မပြတ်မသားနဲ့ ဝေးနေရတဲ့ ချစ်သူရည်းစားမျိုး ရှိခဲ့ရင်…ဒီတစ်နှစ်မှာ ပြန်ဆက်ရ လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။
ရာဟုဖွားတွေကတော့ မထင်မှတ်ပဲ ကောက်ရသလို ပေါ်လာမယ့် ကိုယ်ထင်ထားတာထက်…အဆင်ပြေနေမယ့် …အချစ်ရေးကဏ္ဍမျိုး ကြုံလွယ် တတ်ချိန် ကာလပါ။
အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသား ရာဟုဖွား ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့…သည်တစ်နှစ်အဖို့……မစလိုက်မိပါစေနဲ့။ စလိုက်မိတာနဲ့….နံပါတ်2က ….ဂျိတ်ကနဲ ချိတ်သွား တတ်ပါကြောင်း။
အများစု ကောင်းမွန်ကြမယ့် နှစ်မျိုးပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားများ..ပညာရေး တစ်ပိုင်းတစ်စ ဖြစ်နေသူအချို့…ဆက်လက်တက်ခွင့် သင်ယူခွင့်ပါ ရရှိတတ်ကြပါတယ်။
ရာဟုဖွားများ…မထင်မှတ်ဘဲ သင်တန်းတစ်ခု (သိပ်အလိုအပ်ကြီးမဟုတ်သော်လည်း) တက်ခွင့်ရပါမယ်။
ကိုယ်ဘယ်လိုင်းမှန်းထားတယ်..ဘယ်လိုပန်းတိုင်ကို ..စသည်ဖြင့် ကျိန်းသေ ရည်မှန်းထားသည်များ….လွဲချော်တတ်သော ကာလပါ။
နဂိုအခံ အတက်ရောဂါ၊ မူးမေ့တတ်ခြင်း၊ အပြင်းဖျား၊ ငှက်ဖျား နှင့် အူရောင်ငန်းဖျား၊ အဆုတ်နာ၊ ခြင်ဆီအားနဲခြင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာများ ကဲ့သို့ ဝေဒနာမျိုး ခံစားဖူးသူများ …သည်တစ်နှစ် ပိုမိုသတိပြုရပါမယ်ခင်ဗျာ။
ကံမကောင်းရင် တစ်ကျော့ပြန်လည်လာတတ်သော နှစ်မျိုး ဖြစ်လို့ပါပဲ။
နေရင်းထိုင်ရင်း..အုံးလွဲသွားသလိုလို..၊ ခါးမျက်သွားသလိုလို၊ အမှတ်မဲ့ ထသွားထိုင်လျောင်း အဆင်မပြေ ရာကနေ…ဟိုအကြောကပ်၊ သည်အကြောတင် လည်း ဖြစ်လွယ်နေသော ကာလတစ်ခုပါ။
နေရင်းထိုင်ရင်းကိုပဲ…စိတ်မြန်လာမယ့်၊ တစ်ခုခု ထလုပ်ချင်သလို ဖြစ်နေမယ့် နှစ်မျိုးပါပဲ။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တယ်..ဆိုတာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်လာပါမယ်။ စွမ်းအင်ထုတ်လို့ သိပ်ကောင်းတဲ့နှစ်မျိုးပါ။
ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုးနေရာမျိုးကနေ…..အရာရာကို ထိပ်ဆုံးတွန်းထိုးဖောက်ထွက်နေရမယ့် နေရာမျိုးမှာ…..နေကြရတတ်ချိန်ပါ။
အရည်အသွေးကို မဖုံးပစ်ပါနဲ့။ ပေါ်လွင်သည်ထက် ပေါ်လွင်အောင်ထားပြီး အသုံးချသင့်ပါတယ်။ အရည်အသွေးနဲ့ထပ်တူ..အကျိုးစီးပွားလည်း ကျယ်ပြန့်လာနိုင်လို့ပါပဲ။
အမုန်းခံရမယ့်ကာလပါ။ ရန်သူပိုမိုပေါလာပါမယ်။ ကိုယ့်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့…ပုခုံးချင်း ယှဉ်မယ်ဆိုတာချည်းပဲ …လူတော်တော်များများမှာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွားတွေအဖို့ အရှက်မရအောင် ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ မိမိတို့ ဂုဏ်သိက္ခာ နဲ့ ကျက်သရေမင်္ဂလာကို ချိုးဖောက်တိုက်ခိုက် ခံရလာတတ်ပါတယ်။ ရန်သူဟောင်း…ရန်စဟောင်းတွေ…ရှိခဲ့ရင် ပိုမိုသတိပြုရမယ့်နှစ်မျိုးပါ။
ရာဟုဖွားတွေအနေနဲ့…မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားသော …စက်ပစ္စည်းအချို့ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်လွယ်သော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗုဒ္ဓဟူးရော ရာဟုတွေရော အတွက်ပါ သည်တစ်နှစ်သည် …အကျိုးစီးပွားကို တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ပိုရှာကြသင့်သည့် နှစ်မျိုးပါ။
၇နှစ်မှ တစ်ခါ…ရနိုင်သည့် အခွင့်အခါမျိုးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ ရန်သူပါပဲ။ အေးအေးဆေးဆေးနေချင်ပါတယ်ဆိုစေဦး..နေရခက်မယ့်ကာလမျိုးပါ။
အရှေ့တောင်အရပ်နဲ့ အနီရဲရဲအရောင်တို့ကို သတိပြု သွားလာခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း ပြုအပ်သောကာလပါ။
နံ့သာရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ အဖြူ နဲ့ ၀ါညိုရောင်တို့ကတော့ အကျိုးပြုနိုင်သော အရောင်များ ဖြစ်ကြပြီး…..၊ အနောက်စူးစူးနဲ့ အရှေ့အရပ်တို့သည် အကျိုးပြုအရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေနေသူများ ..တောင်အရပ်ကနေ အလုပ်အကိုင် ရလွယ်တတ်ပါတယ်။
သည်တစ်နှစ်အကျိုးပေးဂဏန်းတွေကတော့….၅၊၄၊၈ တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကောင်းမြတ်သော ၁၃၇၉ခုနှစ် တွင် …ဗုဒ္ဓဟူး ရာဟု ဖွားများ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာ အောင်မြင်ခြင်း ရှိကြပါစေသတည်း။
ကြာသာပတေးနေ့ ဖွားတို့ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
ကြာသာပတေးနေ့ဖွား တွေသည် ….ယခုနှစ်ဖို့ ရာဇဌာနတွင် ရပ်တည်ခွင့် ကြုံကြိုက်သော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော…ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန်သည် ဖြစ်ပါစေ….
သည်တစ်နှစ်အဖို့…ကံအကောင်းနိုင်ဆုံး…၊ ကံအခွင့်အလမ်း အသာနိုင်ဆုံး နေ့ဖွားသည် …ကြာသာပတေးနေ့ဖွား တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်အင်မတန်မှကို မူလဇာတာ…အမည်၊ ရောက်ဆဲအသက်ပိုင်းတို့အရ ..အညံ့ကြုံနေသူတို့သာ……ဒီနှစ်မှာ ဆိုးကျိုးကျရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး….အများစုကတော့ …..
ဒီတစ်နှစ် ၁၃၇၉ခုနှစ်သည်…ကံကောင်းမှုကြုံနိုင်ကြသော နှစ်မျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အကွက်ကျကျ စီစဉ်ထားတာတွေ….အစီစဉ်တစ်ကျ ရုပ်လုံးပေါ်လွယ်လာမယ့်ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြွေအရံအပေါင်းအသင်း သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့ ..စီးပွားရှာလွယ်သော ကာလမျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နဂိုကတည်းက…ဗျုဟာကျကျ..စီမံတတ်သူမျိုး ဖြစ်လေလေ…သည်တစ်နှစ်ဟာ အောင်မြင်နိုင်လေလေပါပဲ။
မလိုအပ်ဘဲ အသိမှတ်ပြုခံချင်မှု ကိုတော့ လျှော့သင့်တဲ့နှစ်ပါ။ မလိုအပ်ဘဲ မဏ္ဍဋ်တိုင် တက်ပြတာမျိုးလုပ်မိခြင်းကနေ..ရမယ့်အကျိုးစီးပွား အထစ်အငေ့ါဖြစ်တတ်ချိန်ပါ။
အများစုက ကိုယ့်ကို အလေးထားပြီး …အသိမှတ်ပြုလာတတ်ချိန်မို့..အလုပ်လုပ်သလောက်လည်း အသိမှတ်ပြုခံရပါမယ်။
သေချာအကွက်ချြူပီး တစ်ဆင့်ချင်းသေသေသပ်သပ် ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီတစ်နှစ်ဟာ …လှေခါးထစ် တစ်ဆင့်တက်ခွင့် ရနိုင်တဲ့ ကောင်းသောအကျိုးခံစားခွင့် နဲ့ တူတဲ့ နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
မူလဇာတာ ကောင်းခြင်း၊ မူလမှည့်ခေါ်ထားသော အမည်အနေအထား မှန်ကန်ခြင်း ရှိပါမှ…ဒီတစ်နှစ်သည် ..သက်သာရာရပါလိမ့်မယ်။
မူလဇာတာအနေအထားနဲ့ အမည်မှာပါ အပြစ်ရှိနေခဲ့သူ ကြာသာပတေးနေ့ဖွားအချို့အတွက်ကတော့….
ယခုကဲ့သို့သော နှစ်မျိုးသည်…..ချစ်ခင်စုံမက်ရသူနဲ့ ဝေးလွဲ ၊ ခွဲခွာလွယ်တတ်သော နှစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပျိုလူပျိုများအတွက် လည်း ရည်းစားလက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ…ရှိတာလေး ..ပဲ့မသွားအောင် ဂရုစိုက်ရမယ့်နှစ်ပါ။
ထူးဆန်းတာတစ်ခုကတော့….မဖြစ်နိုင်တဲ့အချစ်ရေးအခြေအနေမျိုး သော်လည်းကောင်း၊ အသိုက်အ၀န်း၊ နေရာဒေသ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ စသည်ဖြင့် ကွာခြားသော မေတ္တာရေးမျိုးသော်လည်းကောင်း၊ မိဘလူကြီးပတ်ဝန်းကျင် အသိုက်အ၀န်းမှာ လက်ခံနိုင်ဖို့ ခက်ခဲသော မေတ္တာရေးအခြေအနေမျိုးသော်လည်း …ပေါ်ပေါက်လွယ်သော ကာလ ဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။
အားနဲချက်တွေ …ပြစ်ချက်တွေ…ရှိနေသူကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်…အချစ်ဆိုတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်ပြီး…..ရွေးခြယ်မိစေတတ်သော နှစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေး..မေတ္တာရေးမှာ…နယ်လုစစ်ပွဲတွေ မပြုမိကြဖို့လည်း အထူးလိုအပ်ချိန်ပါ။ နေရာလုတာ…နေရာအတွက် ..အချင်းပွားရတာ၊ ဘယ်မှာနေမယ်…ဘယ်လိုနေမယ်စသဖြင့်….အငြင်းအခုန်ဖြစ်ကြတာမျိုး တွေ ပြုမိမယ်ဆိုရင်တော့…သည်တစ်နှစ် အချစ်ရေးသည် …အနှုတ်လက္ခဏာ ပိုိမိုပြလာမယ့် နှစ်ပါပဲ။
အမည်အရ ဆိုရင်တော့….အမည်အဖျားစာလုံး (အဆုံးစာလုံးကို) ရ၊ယ၊လ၊၀ ဖြင့်မှည့်ခေါ်ထားမိသော ကြာသာပတေးနေ့ဖွားများအဖို့ …မေတ္တာရေးရာအ၀၀မှာ သတိထားရတော့မယ့် ကာလ ဖြစ်ပါမယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ..မြင့်မြင့်ဝေ၊ မြင့်ဆွေဝင်း၊ ရှင်းသန့်လင်း၊ အေးအေးယု၊ မြတ်နိုးရွှေ….စသည်….။
လုပ်သလောက် အသိမှတ်ပြုခံရမယ့် ကာလပါ။
သို့သော် သင်တန်းတွေ၊ နောက်ထပ် သင်ကြားမှုတွေ ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ သေချာစဉ်းစားပြီးမှသာ ..တက်သင့်မတက်သင့် ခွဲခြားဆုံးဖြတ်ပြီးမှ တက်ပါ။
မလိုအပ်သော သင်တန်းအပိုတွေ တက်မိခြင်းမျိုးကနေ…ဒီတစ်နှစ်မှာ အချို့သော အကျိုးစီးပွားတွေ လက်လွှတ်ရတတ်ခြင်း ရှိနိုင်လို့ပါပဲ။
ဒီတစ်နှစ်က မျိုးရိုးလိုက်သော ရောဂါဘယ အမျိုးအစားများ ဖြစ်ပွားလွယ်တတ်သလို…၊ အမျိုးသမီးမီးယပ် မမှန်ကန်တတ်ခြင်း( အများအားဖြင့်င (ထိမ်ကျန်ခြင်းနဲ့ ချုပ်ခြင်းမျိုး ) ဖြစ်ပွားလွယ်တတ်ပါတယ်။
ရင်ကျပ်ခြင်း နဲ့…အသက်ရှုမ၀သကဲ့သို့ မကြာမကြာ ဖြစ်တတ်ခြင်းမျိုး ..ခံစားရတတ်သော နှစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေမျိုးသွေးသားရေးရာကဏ္ဍမှာ…အဆင်မပြေမှုအထစ်အငေ့ါလေးတွေ ဖြစ်လွယ်တတ်သော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်နှစ်မှာ နေရာလုရတဲ့အခြေအနေအချို့လွယ် …ဖြစ်လွယ်ကြုံလွယ်ပါတယ်။
သူတစ်ပါးကိစ္စအတွက် ကိုယ်က ရန်ဝင်ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်။
ကံကောင်းစေတတ်သော ကာလ ဖြစ်သော်လည်း…(စနေနေ့တွေသည်) မိမိရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကို ညှိးမှိန်လွယ်စေတာကို တော့ သတိပြု ထိမ်းသိမ်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီတစ်နှစ်မှာ ကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘဲ…၀င်အာမခံပေးတာ၊ သူများအလုပ်ကို ၀င်လုပ်ပေးမိတာမျိုးတွေသည်…မိမိအကျိုးစီးပွားကို ယုတ်လျော့စေနိုင်တာလေးကိုလည်း ….ဆင်ခြင်ရပါမယ်။
အိမ်နီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာ…ကောင်းသောမင်္ဂလာ အခမ်းအနားမျိုး ပေါ်ပေါက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်…..မိမိအတွက်လည်း ကောင်းကျိုး ရလာတတ်သော နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အတူ…အိမ်နီးနားချင်း..အခန်းနီးနားချင်းတွေနဲ့လည်း သင့်တင့်အောင် အဆင်ပြေညီညွတ်အောင် နေထိုင်သင့်သော နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်နှစ်..ကံကောင်းမှုသည် အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်း ဆက်နွယ်နေတတ်ခြင်းကြောင့်ပါပဲ။
မေတ္တာရေး အဆင်မပြေကြသူများအဖို့ အစိမ်းရောင်ကိုတော့….နုနုရင့်ရင့်…ဖြစ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားသင့်ချိန်ပါ။
ခရမ်းပြာရောင်နဲ့….နံ့သာရောင်သည် တစ်နှစ်လုံးအတွက် အကျိုးပြုအရောင်များဖြစ်ပါတယ်။
ထီကံစမ်းလိုသူများအတွက်ကတော့…၅ ၊ ၆ ဂဏန်းများသည်….အကျိုးပေးအား အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ထီကံစမ်းသင့်တဲ့ ရက်ကတော့…တနင်္ဂနွေနေ့ပဲ ဖြစ်ပါကြောင်း။
ကြာသာပတေးနေ့ဖွား အပေါင်းတို့သည် …နှစ်သစ် ၁၃၇၉ခုနှစ် အတွင်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာခြင်း ရှိကြသည် ဖြစ်ကြပါစေသတည်း။
သောကြာနေ့ ဖွားတို့ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
သောကြာဂြိုဟ်သည် …ယခုနှစ်အဖို့….အထွန်း ဌာနတွင် မဟာဘုတ် ဥစ်ဂြိုဟ် အဖြစ် ….ရပ်တည် လာပါတယ်။
သောကြာနေ့ဖွား တွေ အတွက် …ဒီတစ်နှစ်သည်…ခြွေရံ သင်းပင်း များခြင်း၊ ကောင်းသော စားစရာ ၊ ၀တ်စား တန်ဆာတို့ဖြင့် ပြည့်စုံစေ တတ်ခြင်း၊ စည်းစိမ် ခံစား ရခြင်း …ပိုမို ရရှိလာ တတ်သော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပင်….နေရာကောင်းရခြင်း၊ နေရာပေးရခြင်း၊ ကောင်းသောဌာန၊ ကောင်းသော နေရာ၊ ကောင်းသော အခွင့်အလမ်းအချို့လည်း ရနိုင်သော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးစီးပွားရှာဖွေရာမှာ ရှေးကကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ…လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အချို့ကို ပြောင်းလည်းရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ် အကျိုး စီးပွား ရှာဖွေရ ရှိရေးနဲ့ … အလုပ် အကိုင် ကဏ္ဍမှာ … ထင်သလောက် မကောင်း တတ်ပါ။ အချို့သော သောကြာနေ့ ဖွားများ ..အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်ရခြင်း၊ အနားယူ ရခြင်း ရှိနိုင်သော ကာလ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးယခင်လို လွယ်လွယ်ကူကူမဖြစ်တော့ဘဲ…အထစ်အငေါ့များပြား လာတတ်ချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အချစ်ရေး မေတ္တာရေးမှာ ပြိုင်ဘက်ရန်သူ ပေါ်လွယ်သော ကာလပါ။
အပျိုလူပျိုများ အဖို့…မိမိ ချစ်သူကို အခြားသူက လာကြူ တာမျိုး ကြုံရတတ်ခြင်းသော် လည်းကောင်း….မိမိက … အခြားသူ တစ်ဦးရဲ့ ချစ်သူကို …မြတ်နိုး စုံမက်မိခြင်း မျိုးသော် လည်းကောင်း ….. ကြုံကြိုက်ကြ ရတတ်သော ကာလဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကယ်ကတော့…အချစ်ရေး မေတ္တာရေးမှာ….ယှဉ်ပြိုင်ဘက် ပေါ်လာတတ်သော ကံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်သည်များ အဖို့ ……မိမိနေအိမ်ကို သူစိမ်း သူရံ အရွယ်ကောင်း အင်္ဂါနေ့ဖွား သို့မဟုတ် အင်္ဂါနံ အမည်ရှင်မျိုး …ညဉ့်အိပ်ညဉ့်နေ…သို့မဟုတ် ယာယီ အတူနေ အဖြစ် ….မထားတာ ပိုသင့် ပါလိမ့်မယ်။
လုံးဝ….လုံးဝ..ချစ်သူ မရှိသေး သူများ အဖို့တော့…
ဒီတစ်နှစ်မှာ….ဖူးစာရေး နတ်ကလေးက…..စစ်ဘက်၊ စက်မှု နယ်ပယ်ဘက် သို့မဟုတ် ထက်မြက် ထူးချွန်သော…စိတ်ဆတ်သော …ဖူးစာဖက်မျိုးကို ….ချိန်ရွယ် ပစ်ခတ်ပေး တတ်သော ကာလပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မပြီးနိုင်မစီးနိုင် ပညာရေး အနေအထား ဖြစ်ပေါ်လွယ်သော နှစ်ပါ။
တစ်ချို့တွေ…စာမေးပွဲ ကျရှုံးမှုကြောင့်…ပညာရေး အရစ်ရှည် ပါမယ်။
အချို့ကတော့ ပညာရေးမှာ ဘွဲ့လွန်လိုမျိုး……ဆက်ခါဆက်ခါ တက်ခွင့်တွေ ရရှိကြပါမယ်။
ပညာဘယ်လောက်တော်တော်…အသိမှတ်ပြုခံရဖို့တော့ ခက်ခဲတဲ့ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်နှစ် သတိထား အပ်သော နှစ်ပါ။ အာယုဂြိုဟ် တနင်္ဂနွေ နဲ့ ပက္ခ အဖြစ် ရပ်တည် ဆက်နွယ်နေမယ့် နှစ်ဖြစ် တာကြောင့်… သည်တစ်နှစ်… .အဖို့… ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်လေးတွေ ပေါ်လွယ် လာတတ်ချိန်ပါ။
ဦးခေါင်း၊ နှလုံး ၊ အရိုးအဆစ် ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာ အခံရှိထားသူများ ပိုမိုဂရုစိုက်အပ်သော နှစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
သောကြာနံ အစ + အဆုံး အမည်ရှင်များ / ဥပမာအားဖြင့် ….သွယ်သွယ်ဟန်၊ သီတာမြင့်သူ၊ သန်းထိုက်မိုးဟိန်း၊ သော်ဇင်ဟိန်း စသည်ဖြင့် သော အမည်ရှင်များ အဖို့ ကျန်းမာရေး ပိုမို ဂရုစိုက် အပ်သော နှစ်မျိုးပါ။ ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားသောကြာနေ့ဖွားတွေလည်း ဒီတစ်နှစ် ကျန်းမာရေးသည် ..အထူး ဂရုပြုရမယ့် နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အထောက်အပံ့ကောင်း ရလွယ်ခြင်း၊ နေရာကောင်း ရတတ်ခြင်း၊ နေရာပေး ခံရခြင်း၊ ကျောထောက် နောက်ခံ ကောင်းများ အလိုလို ရရှိတတ်ခြင်း ဆိုတဲ့ ကုသိုလ်ကံ အကျုိုးပေးလေးတွေ ပေါ်ပေါက် လာတတ်သော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် …ဒီအကျိုးပေး ကံလေးကို….အကျိုးရှိရှိ အသုံးချ သင့်ပါတယ်။
အလုပ်အကိုင်တွေကတော့ ထင်သလိုမဖြစ်တတ် ချိန်မို့….ယခင်ထက် ပိုမိုကြိုးစားနေကာမှ တော်ရုံ ကြမယ့် ကာလပါ။
အိမ်ထောင်ရေး ဆိုးတတ်သော ကာလမဟုတ်သော်လည်း…ရန်ကိန်းလေး တွေပေါ်လွယ် တတ်ချိန်ပါ။ အထူးသဖြင့် မိမိတို့ အိမ်ထောင်ဖက် သို့မဟုတ် ချစ်သူသည် ခါတိုင်းနဲ့ မတူပဲ..စိတ်တို စိတ်ဆတ် လာတတ်ပါတယ်။
အကြွေးတင် လွယ်သော ကာလပါ။ လွယ်လွယ် ကူကူနဲ့ကို..ချေးဌား လာတတ် ပါတယ်။
အိမ်နီးနားချင်းတို့ရဲ့ အကျိုးကို ခံစား ရတတ်ပါတယ်။
ဒီတစ်နှစ်မှာ…..အလိုလိုနေရာကောင်း ရရှိခွင့်ကံ နဲ့…..အထောက် အပံ့ကောင်း ရရှိတတ်သော ကံ တို့နဲ့ ….ဆုံမိရင်တော့ …သက်တောင့် သက်သာ မျောလိုက်ပြီး …အဆင်ပြေမှာ သေချာပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် ထွင်ဖောက် ထွင်လျှောက်ဖို့ ကတော့ တကယ် မလွယ်လှတဲ့ နှစ်ပါပဲ။
အချို့သော သောကြာနေ့ဖွားများ…ရာထူးတိုးတက်ရေး…ကဏ္ဍမှာ မပြတ်မသားနဲ့ ရမလိုလို မရမလိုလို….လိုလို…လိုလို စခမ်း သွားရ ပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်အပ် / ရှောင်အပ်
ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာ ….သောကြာနံနဲ့ ကြာသာပတေးနံတို့ အထူး အကျိုးပေး လာတတ်ပါတယ်။
ခရမ်း၊ ခရမ်းပြာ နဲ့ …၀ါရွှေရောင်၊ နံ့သာရောင်တို့သည် …အထူး အကျိုးပေးသော အရောင်များ အဖြစ် ရပ်တည်မှာဖြစ်ပြီး …….
အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေး အဆင် မပြေဖြစ်နေ ကြသူ များကတော့ အနီရဲရဲ အရောင်ကို အထူးရှောင်ကျဉ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ထီကံစမ်းမယ် ဆိုရင် ၆ ၊ ၅ ၊ ၂၊ ၉၊ နဲ့ ..(၃) ဂဏန်းကို နောက်ဆုံးမှာ တွဲပြီး..မိမိနေရာ အရပ်နဲ့ နဲနဲဝေးသော ဆိုင်တစ်ဆိုင် ကနေ ကံစမ်းသင့်ချိန် ဖြစ်ပါကြောင်း………….။
ယခုနှစ် ၁၃၇၉ခုနှစ် အတွင်း …သောကြာနေ့ဖွား အပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့သည်….စိတ်၏ ကျန်းမာခြင်း ..ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပြီး…..လောကီ အကျိုး ၊ လောကုတ္တရာ အကျိုး…သယ်ပိုးနိုင်ကြသည် ဖြစ်ကြပါစေသတည်း။
စနေနေ့ဖွား တို့ ကံဇာတာ (၁၃၇၉)
စနေနေ့ဖွားတို့သည် …ယခုနှစ်အဖို့ မွေးနံဂြိုဟ် ဘင်္ဂမှာ ရပ်တည်ချိန် ကျရောက်လာပါတယ်။
စနေနေ့ဖွားများ အတွက် …အပြောင်းအလည်း များစွာ ဖြစ်လွယ်သော ကာလ တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်သလို…. … အမျာစုအဖို့ မေတ္တာရေးရာ ချစ်မှုရေးရာတို့မှာလည်း ကံကောင်းနိုင်မှု ကြုံနိုင်သော အချိန် ဖြစ်လာပါတယ်။
အပြောင်းအလည်းများစွာထဲမှာ….မကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတော့ …မနေလိုသောနေရာဌာနကို ပြောင်းလည်းရတတ်ခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်ခြင်းကံသည် ထိပ်ဆုံးမှာ ပါတတ်ချိန် လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါကြောင်း။
ဒီတစ်နှစ် အလုပ်အကိုင် ကဏ္ဍမှာ ….စနေနေ့ဖွားများအဖို့…ယာယီအလုပ်မျိုးတွေ၊ ဇက အလုပ်မျိုးတွေ၊ သောင်မတင်ရေမကျ အခြေအနေတွေ ရောထွေးပါဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အများစုသော စနေနေ့ဖွားများအဖို့….ယင်းအခြေအနေမျိုးတွေ ရင်ဆိုင်ရတတ်ချိန်ဖြစ်ပြီး…..
အချို့သော စနေနေ့ဖွားများ အဖို့ကတော့ ….အသက်မွေးမှု အလုပ်အကိုင် တစ်ခုမက …နှစ်မျိုးနှစ်ခွကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထိမ်းချုပ်ကိုင်တွယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေရတတ်ချိန် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အချို့သော စနေနေ့ဖွားများ…အလုပ်အကိုင် အသက်မွေးမှု အကူးအပြောင်း ရှိတတ်ပြီး….ခေတ္တာယာယီအားဖြင့် …အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာမျိုး အခြေအနေအချို့လည်း ကြုံကြိုက်ကြရတတ်ပါတယ်။
ဒီတစ်နှစ် စနေနေ့ဖွားတို့ရဲ့ အသက်မွေးမှု အလုပ်အကိုင်နဲ့ …အကျိုးစီးပွား အ၀၀ကို …ဆန့်ကျင်တတ်သော ..နေ့ရက်ကတော့ …သောကြာနေ့ဖြစ်တာမို့..၊ ၄င်းနေ့မျိုးမှာ အလုပ်အကိုင် အသက်မွေးမှု ကဏ္ဍများ လုပ်ကိုင်ရာမှာ အနဲငယ်သတိထားပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
ချစ်မှုရေးရာ နှင့် မေတ္တာရေး
တော်တော်များများသော စနေနေ့ဖွားများအဖို့ မေတ္တာရေး ကံအားသာတတ်ချိန်ပါ။ အိမ်ထောင်သည်များအဖို့ မိမိတို့အိမ်ထောင်ဖက် နှင့် ပတ်သက်စပ်လျဉ်းသော ကောင်းကျိုးသုခ ရရှိလွယ်တတ်သလို..၊ သို့တည်းမဟုတ်..အိမ်ထောင်ဖက် တွင် ထူးထူးခြားခြား ကံကောင်းမှု ပေါ်ပေါက်နေခြင်းမျိုးသော်လည်းကောင်း …တွေ့မြင်ရတတ်ချိန် လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
လူပျိုလူလွတ်များအဖို့တော့ ….ဒီတစ်နှစ်သည် ..ဖူးစာရေးနတ် မျက်နှာသာပေးတတ်ချိန် ဖြစ်တာကြောင့် ….ကြံစည်ကြိုးကုတ် အစွံထုတ်ကြဖို့…လုံ့လပြုသင့်သော ကာလဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ထက်မြင့်တဲ့သူမျိုးနဲ့ ဖူးစာရေးရှိတတ်ချိန်မို့….ကိုယ်နဲ့အလှမ်းကွာတယ်ဆိုပြီး…ဒီတစ်နှစ်တော့ အားမငယ်လိုက်ဘဲ….အနိုင်ကျဲလိုက်သင့်တဲ့ ကာလ ဖြစ်ပါကြောင်း။
တစ်ကျော့ပြန် ပြန်လည်ကြိုးစားရယူနိုင်စွမ်း ရှိလာတတ်ချိန် ပါ။ ဒါကြောင့် …ပြန်လည်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ မမေ့မလျော့ ..ရှိသင့်ကြပါတယ်။ ကျရှုံးဖူးထားသော စာမေးပွဲမျိုးတွေ သိပ်ပြီး ပြန်ဖြေလို့ ကောင်းတတ်ချိန်..ပြန်ဖြေနိုင်စွမ်း ရှိလာချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
အလိုလိုနေရင်း အကြောအချဉ်များ တောင့်တင်းလွယ်နေတတ်ပါတယ်။ အာရုံကြောဝေဒနာအခံရှိဖူးသူများ…ဒီတစ်နှစ်ထဲမှာ…အာရုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာပြန်ပေါ်လာပါမယ်။
နေရထိုင်ရတာ အလိုလိုနေရင်းကို မအီမသာ ဖြစ်နေတတ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာ အထက်ပါကဲ့သို့ မအီိမသာဖြစ်မှုမျိုးကို ပိုမိုသိသိသာသာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
အာယုဂြိုဟ် အနေအထား ကောင်းချိန်မို့….ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့ တနင်္လာနေ့များကလွဲရင် …ကျန်နေ့ရက်များမှာ ကျန်းမာရေးစတင်ယိုယွင်းမှုမျိုး ဖြစ်ဖို့ခဲယဉ်းစေတတ်ပါတယ်။
အများစုအဖို့ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်နိုင်သော နှစ်မျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီတစ်နှစ် စနေနေ့ဖွားတွေကို အညံ့နိုင်ဆုံးကံကတော့…..နေရတာမပျော်တဲ့ စိတ်….နှိပ်စက်ဖိစီးတတ်ခြင်းပါပဲ။ ငွေတွေသိန်းချီအောင် ၀င်နေပါစေ၊ ရွှေဇွန်းခယင်းနဲ့ပဲ စားနေရပါစေ၊ အချစ်ဆုံးသူနဲ့ပဲ အတူတူနေနေရပါစေဦး….နေရထိုင်ရတာ အဆင်မပြေ သလို ဖြစ်ဖြစ်လာပြီး ငြီးငွေ့စိတ် ပင်ပန်းစိတ် ၀င်လာတတ်သော ကာလမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေကြီးနဲ့ပဲ …ကြာတော့ ပျင်းလာ ငြီးငွေ့စိတ်ကုန်လာပြီ ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး မကြာမကြာ ၀င်လာတတ်သော နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။
၀န်ထမ်းအချို့လည်း …မပျော်ပိုက်တဲ့နေရာ…မနေလိုတဲ့ဌာနမျိုးကို ပြောင်းရရွှေ့ရ တတ်ပါတယ်။
နယ်စွန်နယ်ဖျားတွေ၊ သူများမသွားလိုတဲ့ နေရာတွေကို …အလွယ်တစ်ကူကိုယ့်မှာ တာဝန်ကျပြီး သွားနေရတတ်တဲ့ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်၍ခင်၍ ပေးသော လာဘ်မျိုး…၀င်လွယ်သော အချိန်ပါ။ ပျိုရွယ်သူအဖို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ်လက်ထပ်ခြင်းမျိုးဖြစ်စေ…၊ လူနဲစုနဲ့အကျဉ်းရုံးလက်ထပ်ခြင်းမျိုးဖြစ်စေ…ကြုံလွယ်သောကာလမျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့သော စနေနေ့ဖွားများ…မရွယ်ဘဲ စော်ကဲမင်းဖြစ်သလို….မထင်မှတ်ထားဘဲ…(ကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘဲ) ကောင်းကျိုးသုခ ခံစားရခြင်းမျိုးလည်း ထူးထူးခြားခြား ပေါ်လာတတ်ချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
မေတ္တာရေး နဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုရင်….တနင်္လာနေ့ ကို သတိပြုဆင်ခြင်အနေအပ်ဆုံးကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်မွေးမှုအတွက် အလုပ်အတွက် ..စသည်ဖြင့်တွေကတော့ သောကြာနေ့ကို သတိပြု လုပ်ကိုင်ရမှာ ဖြစ်သလို…၊ လက်ထပ်ထိမ်းညားလိုသူများအဖို့လည်း……သောကြာနေ့ကိုတော့ ရှောင်ရှားသင့်လှပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖို့ကတော့ ကြာသာပတေးထောင့်မှာ ကောင်းမှုကုသိုလ် မကြာမကြာပြုပြီး….အဓိဌာန်စသည်တို့ဝင်ခြင်းဖြင့် ကံကောင်းမှု မုချ ပေါ်လွယ်တတ်သော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံးမှာ…အနီရဲရဲအရောင် နဲ့ အနက်ရောင် ကို အဓိက ရှောင်အပ်ပြီး .. …ရွှေအိုရောင် ရင့်ရင့် နဲ့…ခရမ်းရင့်ရောင်များကတော့ မိမိတို့အတွက် ဆောင်သင့်သောအရောင်များ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ထီကံစမ်းလိုသူများအဖို့….၄၊ ၈၊ ၅ ဂဏန်းများ နဲ့ …သောကြာ နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့ ကြာသာပတေးနေ့များ မှာ ကံစမ်းသင့်ချိန် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ယခုနှစ်အခါသမယအတွင်း စနေနေ့ဖွားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည် စိတ်၏ ကျန်းမာခြင်း ၊ ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်း ဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်ကြသည် ဖြစ်ကြပါစေသတည်း။
Credit : ကိုစိုးမိုးထွန်း ( ဗေဒင်ပညာ သုတေသီ )
From : ဗေဒင်ဝါသနာအိုး
Originally published at - http://baydinwartanaroh.com
ဆရာ စံဇာဏီဘို၏ ဇွန်လ ၇ ရက်မှ ၁၃ ရက် အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
ဇွန်လ ၇ ရက်မှ ဇွန်လ ၁၃ ရက် အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တိုင်းတွင် စောင့်မျှော် ကြည့်ရှု နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, June 07, 2017 No comments:
ကုမုဒြာ ဗေဒင် (စံ- ဇာဏီဘို)
ဥစ္စာဓနနှင့် လာဘ်လာဘ တိုးပွားတိုးတက်မည်။ ရည်မှန်းချက်သစ်နှင့် ဆောင်ရွက်လိုက်သောကိစ္စမှ ထူးခြားစွာ တိုးတက်မည်။ လူမျိုးကွဲ၊ လူမျိုးခြား အကျိုးပေးမည်။ ပညာအတတ်ကို အခြေတည်၍ လုပ်ဆောင်သော ကိစ္စများမှ အဆင်ပြေမှုများရရှိမည်။ အရပ်ဝေး၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်ပြီး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်၍ ထူးခြားသော တိုးတက်မှုများရရှိမည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အိမ်ရှေ့ခန်းရှိပရိဘောဂများကို အထားအသို နေရာပြောင်းလိုက်ပါ။
အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စများအတွက် စကားပြောဆိုရခြင်းများ ကြုံ မည်။ ပညာသင်တန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရန် အထူးကောင်းသော ကာလဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူမှု မှားယွင်းတတ်သည်။ အပျက်အယွင်းများသောပစ္စည်းများ ဝယ်ယူမိတတ်သည်။ အသုံးမတည့်သော ခေတ်မီပစ္စည်းများကို ဈေးကြီးပေး၍ ဝယ်ယူကာ မကိုင်တွယ်တတ်၍ ကစဉ့်ကလျား ကမောက်ကမ ဖြစ်မည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္လာနေ့တွင် ဂန္ဓမာပန်း ဘုရားကပ်လှူပါ။
ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စနှင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများမှ ထူးခြားသော အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည်။ ငွေကြေးကံကောင်းမည်။ ကာလရှည်ကြာ စောင့်ဆိုင်းနေသောအခွင့်အရေးများကို လက်ဝယ်ပြန်လည်ရရှိမည်။ ကြာ သပတေးနေ့၊ စနေနေ့မွေးသောသူများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်သောကိစ္စများမှ မြင့်မားသောတက်လမ်းများ၊ အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည်။ အမျိုးသမီး မိတ်ဆွေအကြီးအကဲတစ်ဦးထံမှ ထူးခြားသောအကူအညီရမည်။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် ရွက်လှပန်း ဘုရားကပ်လှူပါ။
ငွေကြေးကိစ္စ အရှုပ်အထွေးများအကြား ပါဝင်ပတ်သက်ရတတ်သည်။ အမည်အတွင်း က၊ ခ၊ သ၊ဟ ပါသောသူများ၏ ကုန်းချောစကားဆိုခြင်း၊ ချောက်တွန်းခြင်း၊ အတင်းအဖျင်းပြောဆိုခြင်းကို ခံရတတ်သည်။ ဦးတည်ချက်ပြောင်းလဲပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်းများမှ ထူးခြားသော တိုးတက်မှုများ ဖြစ်ထွန်းလာမည်။ အနောက်အရပ် သို့မဟုတ် အနောက်တောင်အရပ်များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများ အဆင်ပြေမည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် သပြေပန်း ဘုရားကပ်လှူပါ။
ရန်အတိုက်အခံများကို ကျော်လွှား၍ အလိုပြည့်စုံမည်။ လူမျိုးကွဲ လူမျိုးခြားများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံ၍ ကောင်းသောအကျိုးဆက်များ ရလာမည်။ ငွေကြေးအပေးအယူကိစ္စများ သတိနှင့်ယှဉ်၍ ဆောင်ရွက်ပါ။ အခါတိုင်း မိမိအား ရန်သူသဖွယ်ဆက်ဆံသူများကို မိတ်ဆွေအဖြစ် ပြောင်းလဲဆက်ဆံရခြင်းများ ကြုံမည်။ ရင်းရင်းနှီးနှီး ယုံယုံကြည်ကြည် ဆက်ဆံထားသူများ ဒုက္ခပေးမည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူး မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပိန်းပန်းပွင့် ဘုရားကပ်လှူပါ။
အပြိုင်အဆိုင်များအား အနိုင်ရမည်။ ငွေအစုလိုက်ဝင်မည်။ ဝင်လာငွေမမြဲနိုင်ပါ။ ဝင်လာသောငွေများအား လာရောက်ဖဲ့ယူသုံးစွဲသူများ ရှိမည်။ ငွေလာချေးသူများ ပေါ်ပေါက်မည်။ ပြန်ဆပ်မည်မဟုတ်။ သူတစ် ပါးတို့၏ နာရေးကိစ္စများအား ကူညီပေးရမည်။ လူမှုရေးပြဿနာများ ကြားဝင် ဖြေရှင်းပေးရမည်။ ပညာအတတ်နှင့်ပတ်သက်သောကံကောင်းသည်။ ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်မည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် သရက်သီးမှည့် ဆွမ်းတော်တင်ပါ။
အလုပ်ကိစ္စ၊ အိုးအိမ်ကိစ္စတို့တွင် စိတ်အနှောင့်အယှက်များ ဖြစ်ပေါ်မည်။ ငွေကြေးအပေးအယူကိစ္စ သတိရှိရမည်။ စာရင်းဇယားလက်လွှဲ လက်ပြောင်း သတိရှိရမည်။ ကတိပျက်သောသူများကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ကြုံမည်။ အိမ်တွင်းရေး၊ လူမှုရေး ပဋိပက္ခများ ဖြစ်မည်။ မိဘအကြီးအကဲများ သက်ရှိထင်ရှားရှိက ၄င်းတို့၏ကျန်းမာရေးအား အထူးသတိရှိရမည်။
ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် နဂါးမောက်သီးဆွမ်းတော်တင်ပါ။
စာရွက်စာတမ်းမပြည့်စုံမှုကြောင့် နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံလုပ်ရမည်။ သူခိုးသူဝှက်အန္တရာယ်အား အထူးသတိရှိရမည်။ တနင်္ဂနွေနေ့၊ အင်္ဂါနေ့၊ သောကြာနေ့ မွန်းလွဲချိန်များတွင် နေအိမ်တွင် သူခိုးသူဝှက် ဂရုစိုက်ရမည်။ နေ့ခင်းနေ့လယ် အချောင်သမားများ လာရောက်ယူငင်သွားတတ်သည်။ အမျိုးသမီး သူခိုးသူဝှက်အန္တရာယ်အား ဂရုစိုက်ရမည်။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် အုန်းညွန့် ဘုရားကပ်လှူပါ။
စံ- ဇာဏီဘို (ဖုန်း-၆၄၁၆၃၉)
From : ကုမုဒြာဂျာနယ်
ဆရာ စံဇာဏီဘို၏ မေလ ၃၁ ရက်မှ ဇွန်လ ၆ ရက် အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
မေလ ၃၁ ရက်မှ ဇွန်လ ၆ ရက် အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တိုင်းတွင် စောင့်မျှော် ကြည့်ရှု နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, May 31, 2017 No comments:
စံ-ဇာဏီဘိုရဲ့ မော်ဒန်ဗေဒင် (မေလ ၂၆ ရက်မှ ဇွန်လ ၁ ရက် အထိ)
အခက် အခဲများ ဖြေရှင်း နိုင်မည်။ အပြိုင် အဆိုင် တို့ကို ကျော်လွှား၍ အဆင့်မြင့် တက်လမ်းများ ရရှိမည်။ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွား မှုများ သတိရှိပါ။ စိတ်တို ဒေါသထွက်အောင် နှောင့်ယှက် သူများ ရှိမည်။ ကိုယ်က စိတ်ကောင်း ထား၍ ကူညီ ပေးလိုက်သော သူကပင် ကိုယ့်အပေါ် ပြန်လည် ဒုက္ခပေးမည်။ တစ်ပါးသူတို့ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွား နေသည့်ကြား ဝင်ရောက် ဖျန်ဖြေခြင်း မပြုရ။ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိသည် သာမက ရုံးရောက် ဂါတ်ရောက် ဖြေရှင်း ရခြင်း ရှိမည်။ အောင်မြင်မှု အပေါ်မနာလို သူများရှိမည်။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် စံပယ်ပန်း ၃၇ ပွင့်ဘုရားကပ်လှူပါ။
အလှူမင်္ဂလာကိစ္စများပါဝင်ကူညီရလိမ့်မည်။ အပြိုင်အတိုက်အခံ များကိုကျော်လွှားအောင်မြင်မည်။ ငွေကြေးအပေးအယူကိစ္စတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်သော ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ ပြောဆိုဆောင်ရွက်နိုင် မည်။ လုပ်ငန်းဟောင်းတို့ကိုရပ်၍ လုပ်ငန်းသစ်များ စတင်ရန်အခြေအနေ အခွင့်အရေးကောင်းများရရှိမည်။ တစ်ပါးသူနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခြင်း ထက် ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်ခြင်းမှ ပို၍ကောင်းသော အကျိုးအမြတ်ရရှိမည်။ ငွေကြေးအပေးအယူကိစ္စများ သတိရှိပါ။
ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သကြားဆွမ်းကပ်လှူပါ။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းပေါ်ပေါက်လာသောပြဿနာနှစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ဖြေ ရှင်းနိုင်မည်။ ရန်အတိုက်အခံများကိုကျော်လွှား၍ အခက်အခဲများ ကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်။ ဆုံးဖြတ်ထားပြီး အကြောင်းအရာတို့ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်သုံးသပ်ရ လိမ့်မည်။ ကာလအတန်ကြာ ရပ်ဆိုင်းထား သောအလုပ်တို့ကို ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ရလိမ့်မည်။ ငွေကြေးအပေးအယူကိစ္စတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောပြဿနာတို့ကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းနိုင်မည်။အိုးအိမ်ခြံမြေအတွက် စကားများရမည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ယပ်တောင်အဟောင်းများ ရှာဖွေစွန့်ပစ်ပါ။
စုပေါင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းအဆင့်တိုးတက် မည်။ လုပ်ငန်းခွင်မှသူများ လခတိုးမည်။ အဆင့်တိုးမည်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိမည်။ တာဝန်နှစ်မျိုး တစ်ပြိုင်နက်တည်းကိုင်တွယ် လုပ်ကိုင်ရမည်။ လူငယ်များလွန်စွာ စန်းပွင့်မည်။ အလှူအတန်း မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲများသို့သွားရောက်ရင်း ဖူးစာဆုံမည့်သူကိုတွေ့မည်။ လုပ်ငန်းရှာဖွေသူများ လျှောက်ထားသည့်အလုပ်မှ အလုပ်မရရှိမီ အခြားအလုပ်တစ်ခု၏ အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရမည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္လာနေ့တွင် ကြံသုံးစိတ်ဘုရားကပ်လှူပါ။
ဆိုးမယောင်နှင့်ကောင်းသည်။ အခက်အခဲများဖြေရှင်းနိုင်မည်။ အ ပြိုင်အဆိုင်အားလုံးကိုကျော်လွှားပြီး အောင်မြင်မှုရရှိမည်။ သူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်သော ပြဿနာများဖြေရှင်းနိုင်မည်။ ခိုင်မြဲမှုမရှိသော ကတိစာချုပ်ဟောင်းများ ကိုအသစ်ပြန်လည်ချုပ် ဆိုနိုင်မည်။ ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးသွက်လက်လျင်မြန်စွာလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းတို့မှ အလိုဆန္ဒပြည့်စုံမည်။ တစ်ပါးသူဖြစ်ပေါ်နေသောအမှုအခင်းတို့ကို လိုက်လံဖြေရှင်းပေးရ လိမ့်မည်။ အိမ်တွင်းရေးပဋိပက္ခများရှိမည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အုန်းသီးစိတ်ဆွမ်းတော်တင်ပါ။
မေတ္တာရေးကံကောင်းမည်။ လူချစ်လူခင် ပေါများမည်။ စန်းပွင့်မည်။ စုပေါင်းလုပ်ငန်း အကျိုးပေးမည်။ စေ့စပ်ခြင်း၊ မင်္ဂလာပြုခြင်းကိစ္စများ ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အခြေတည်၍ ဘဝတိုး တက်မှုများဖန်တီးနိုင်မည်။ ကျန်းမာရေးအညံ့ကြုံက မပေါ့ရ။ ဆေးထိုးဆေးသောက် မှားတတ်သည်။ အားနာလွယ်၊ ယုံလွယ် မှုကြောင့် လူမှုရေးနှင့် အလုပ်၊ ငွေကြေးကိစ္စရောထွေးကာ စိတ် အနှောင့်အယှက်များဖြစ်ရမည်။ ဝေးကွာနေသော ချစ်သူဟောင်းနှင့် ပြန်လည်ဆုံစည်းမည်။
ယတြာ ။ ။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ရခွက်အဟောင်းများရှာဖွေစွန့်ပစ်ပါ။
စီစဉ် ထားသည်က တစ်မျိုး၊ လက်တွေ့ ဖြစ်ပေါ် လာသည်က တစ်မျိုးနှင့် အရာရာ ကစဥ့်ကလျား လုပ်ကိုင် ရခြင်း ကြုံမည်။ ပစ္စည်းပျောက် တတ်သည်။ မိမိ ပစ္စည်းတို့ကို ငှားရမ်း သုံးစွဲပြီး ဖျက်ဆီး သူနှင့် တွေ့မည်။ ချက်ချင်း ပြန်လာပေးမည်ဟု ပြောကာ ယူငင်ချေးငှား လိုက်သော ငွေကြေး တို့ကို လုံးဝပြန် မဆပ်သော သူနှင့် တွေ့လိမ့်မည်။ အိမ်ရှိသူများ ကျန်းမာရေး အညံ့ကြုံက မပေါ့အပ်။ မိမိပိုင်၊ မိသားစုပိုင် ယာဉ်ကားတို့ကို ရပ်ထားစဉ် အခြားကားတို့က ၀င်ရောက် တိုက်မိခြင်း ကြုံမည်။
ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သစ်ဆွေး၊ သံဆွေးများ စွန့်ပစ်ပါ။
ရည်ရွယ်ထားသည်များ အောင်မြင်မည်။ အခက်အခဲများကိုကျော် လွှားနိုင်မည်။ အပြိုင်အတိုက်အခံများကြားမှ တိုးတက်မှုများကြုံမည်။ အသုံးစရိတ်ကြီးမြင့်မည်။ အလုပ်အဆင့်၊ ဘဝအဆင့်တိုးတက်မည်။ မူလအနေအထားထက် ပိုမိုမြင့်မားသောဘဝအခြေအနေသို့ပြောင်း လဲတိုးတက်ခြင်းများရှိမည်။ စွန့်စားဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းတို့မှ အကျိုးကောင်း ရရှိမည်။ ကာလအတန်ကြာရောင်းချရန် ခက်ခဲနေ သောပစ္စည်းများ ဈေးကောင်းပေးဝယ်ယူမည့်သူပေါ်ပေါက်မည်။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် ဇီးထန်းလျက်ဆွမ်းတော်တင်ပါ။
ရန်အတိုက်အခံများ၊ မနာလိုသူများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည်။ စက်ပစ္စည်းများ အပျက်အစီးများမည်။ လှေကား၊ ယာဉ်ကား အတက်အဆင်းများတွင် လဲပြိုတတ်သည်။ ညာခြေ၊ ညာလက်တွင် မတော်တဆထိခိုက်တတ်သည်။ ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ တစ်ပါးသူ ကိစ္စများလိုက်လံဆောင်ရွက်ရင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်တတ်သည်။ လက်ဝယ်ရရှိထားသောအခြေအနေ အခွင့်အရေးတို့ကိုလိုက်လံ လုယက်ယူငင်သူများနှင့်တွေ့မည်။ စက်ပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အလောတကြီး ဝယ်ယူခြင်းမပြုရ။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ဘိန်းမုန့်ဆွမ်းတော်တင်ပါ။
ဦးတည်ချက်သစ်နှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှတိုးတက်မှုများရရှိမည်။ ရန် အတိုက်အခံအားလုံးကိုကျော်လွှား၍ အလိုရှိရာဆန္ဒပြည့်စုံမည်။ ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သောကံကောင်းမည်။ စွန့်စားပြီးလုပ်သော လုပ်ငန်းများအောင်မြင်မည်။ တစ်ပါးသူတို့နှင့်မတူသောအတွေး အမြင်တို့နှင့် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုအထင်အရှားရရှိမည်။ နေရာအပြောင်းအလဲနှင့်တိုးတက်မှုများ ဆောင်ရွက်ရန် အခါကောင်းကျရောက်သည်။ လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမည်။ ကိုယ်တိုင်တွင်လည်းကောင်း၊ မိသားစုတွင်လည်းကောင်း ပြည်ပ ခရီးသွားရလိမ့်မည်။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် ထောပတ်သီးဖျော်ရည်ဒါနပြုပါ။
ခက်ခဲသောပြဿနာများ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ ရန်အတိုက်အခံများနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီး တိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်မည်။ လက်လွန်ထားသော ငွေကြေးနှင့် ကြန့်ကြာနေသောငွေကြေးများ ပြန်လည်ရရှိမည်။ ကူညီမည့်သူထက် နှောင့်ယှက်သူ၊ ဒုက္ခပေးသူ များနေမည်။ ဆောင်ရွက်မည်ဟု သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ငန်းများကို ချက်ချင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိ။ အချိန်ရွှေ့၍လုပ်ကိုင်ရမည်။ အလေးအနက်ထားပြီး ဆောင်ရွက်သောကိစ္စများတွင် ထင် သလောက်မဖြစ်။ ထင်မှတ်မထားသောအလုပ်မှအဆင်ပြေမည်။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင်အထည်ဟောင်းများစွန့်ပစ်ပါ။
ဖြစ်လိုသောရည်မှန်းချက်တို့ကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။အ ခက်အခဲအညံ့အဆိုးတို့ကို ပယ်ရှားနိုင်မည်။ ကိုယ်တိုင်တွင်လည်းကောင်း၊ မိသားစုတွင်လည်းကောင်း အကြံအစည်အောင်မြင်မည်။ ဝင်ငွေ တိုးပွားမည်။ လူမျိုးကွဲတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်၍ လုပ်သောလုပ်ငန်းများအောင်မြင်မည်။ ကတိပျက်သောသူများနှင့်ပဋိပက္ခဖြစ်တတ်သည်။ အများကိစ္စ ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု ပြောဆိုသည့်အတ္တကြီးမားသောသူနှင့် ရန် ပဋိပက္ခ များဖြစ်တတ်သည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် မြေပဲယိုဆွမ်းတော်တင်ပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, May 26, 2017 No comments:
ဆရာ စံဇာဏီဘို၏ မေလ ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက် အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
မေလ ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက် အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တိုင်းတွင် စောင့်မျှော် ကြည့်ရှု နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, May 25, 2017 No comments:
စံ-ဇာဏီဘိုရဲ့ မော်ဒန်ဗေဒင် (ဧပြီလ ၂၁ ရက်မှ ၂၇ ရက် အထိ)
တစ်ပိုင်း တစ်စ ဖြစ်နေ သည်များ၊ ကစဉ့် ကလျား ဖြစ်နေ သည်များ စုစည်း၍ အလုပ် ကိစ္စများ ဆောင်ရွက် ရမည်။ မဖြစ်နိုင်ဟု အများက ယူဆ ထားသည်များ ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက် နိုင်မည်။ ဦးခေါင်းနှင့် မျက်စိတွင် မတော်တဆ ထိခိုက် တတ်သည်။ စီစဉ် ထားသည့် ခရီး ကိစ္စများ ပြန်လည် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ စကားအတိုက်အခံပြောဆိုရမှုကြုံမည်။ မိသားစုအိမ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသောပြဿနာများ လိုက်လံဖြေရှင်းပေးရမည်။ ငွေကြေး လက်လွန်ဆုံးရှုံးတတ်သည်။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် ဇီးသီးဆွမ်းတော်တင်ပါ။
ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်ခြင်း၊ ဘဝတိုးတက်ခြင်း၊ အခက်အခဲမှန်သမျှ ကျော်လွှား၍ တက်လမ်းအဆင့်ဆင့်ရရှိခြင်းကြုံမည်။ လုပ်သမျှ လူသိရှင်ကြားဖြစ်မည်။ ငွေကြေးကံကောင်း၍ မထင်မှတ်သောနည်းဖြင့် မထင်မှတ်ထားသောငွေကြေး လက်ခံရရှိမည်။ ဆုံးရှုံးထားသော ငွေကြေးများ လက်ဝယ်ပြန်လည်ရရှိမည်။ စီးပွားတိုးတက်မည်။ အိမ်တွင်းရှိသူများ အလုပ်တိုးတက်ခြင်း၊ ငွေဝင်ခြင်းကြုံကာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မည်။ အမှုပြဿ နာများ မထင်မှတ်ဘဲ ကြုံမည်။
ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သော့ကျိုး သော့ပျက်များ စွန့်ပစ်ပါ။
အလွန်သတိရှိရမည်။ အရာရာရှုပ်ထွေးနေသည်။ တတ်အားသမျှ ဆင်ခြင်နေထိုင်ရမည်။ ဥပဒေနှင့်မကင်းသောကိစ္စများ ရှောင်ပါ။ အမှား တစ်ချက်ကြုံ သည်နှင့် ဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲမည်။ ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စများ၊ အသင်းအပင်းကိစ္စများတွင် အများတကာက နေရာပေးတိုင်း ရှေ့တိုး၍ ဦးဆောင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ အန္တရာယ်ခံတွင်း သက်ဆင်းရတတ်သည်။ သတိလက်လွတ်ပြောဆိုခြင်း မဖြစ်အောင် ထိန်းပါ။ ရုတ်တရက် ပေါ်ပေါက်လာသော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် မည်သူ့ထံမှ အကူအညီရလိမ့်မည်မဟုတ်။ ဖြစ်သမျှ ခါးစည်းခံရမည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် လက်ဖက်ရည် ဒါနပြုပါ။
အရာရာ သတိနှင့်ယှဉ်၍ နေထိုင်ရမည်။ မည်သူ့ကိုမှ ယုံကြည်၍မရ။ လူယုံ၊ အတွင်းလူ၊ အနီးကပ်လူက ပို၍ ဒုက္ခပေးနိုင်သည်။ တစ်သက်တွင် တစ်ကြိမ် တစ်ခါမှ မကြုံဖူးသော စိတ်ညစ်ဖွယ် ဖြစ်ရပ်ဆိုးများ ကြုံမည်။ မရောက်ဖူးသောနေရာသစ်သို့ ရောက်ရှိမည်။ မသွားဖူးသောခရီးသွားရမည်။ စာရွက်စာတမ်း ကိစ္စနှင့် လူမှုရေးကိစ္စအလုံးစုံတွင် အမှားအယွင်းမရှိ အောင် ဆောင်ရွက်ပါ။ သူရဲကောင်းဆန်ဆန် မိုက်ရူးရဲလုပ်ရပ်များ မပြုရ။
ရိုင်းစိုင်းသည့် သူများ ဝန်းရံနေမည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္လာနေ့တွင် ကြာဆံ ကြော် ဒါနပြုပါ။
ကူညီသူများနှင့်တွေ့မည်။ မိတ်ဆွေသစ်များ တိုးပွားမည်။ ပတ်ဝန်း ကျင်သစ်တွင် အဆင်ပြေချောမွေ့သွားမည်။ ဝေးကွာနေသောသူများနှင့် ဆက်သွယ်မှု လမ်းကြောင်း ကြုံမည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုများ အောင်မြင်မည်။ အ ခက်အခဲများကို ကျော်လွှား၍ အဆင့်မြင့်တိုးတက်မှုများ ရရှိမည်။ အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်မည်။ မှန်းသည်နှင့်လက်တွေ့ ကွာဟနေလင့် ကစား ဖြစ်ပေါ် လာသည့် အလုံးစုံသည် တစ်စုံတစ်ရာကောင်းခြင်းဘက် ဦးတည်နေမည်။ ရောင်းမှား ဝယ်မှား ဖြစ်တတ်သည်။ လူမျိုးကွဲအကျိုး ပေးမည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ဒါနပြုပါ။
အပြောအဆိုဆင်ခြင်ပါ။ စကားတစ်ချက်မှားသည်နှင့် ပြန်လည်ဖြေ ရှင်းရန် ခက်မည်။ မတော်တဆထိခိုက်မှု သတိရှိပါ။ မထင်မှတ်ဘဲ အလုပ် အကြံအစည် အောင်ခြင်း၊ ငွေဝင်ခြင်းများရှိမည်။ အမည်တွင် အ၊ ဥ၊ သ၊ ဟ ပါသူက မိမိထံ ငွေလာရောက်ချေးလိမ့်မည်။ တတ်နိုင်သမျှ မပေးမိ အောင် ထိန်းပါ။ ပညာရေးဆောင်ရွက်သူများအဖို့ လိုရာပြည့်စုံ အောင်မြင်မည်။ မည်။ ရန်အတိုက်အခံကြားမှ အလိုရှိရာ ဆောင်ရွက်ရမည်။ အဖိုးထိုက် အဖိုးတန် လက်ဝတ်ရတနာများ ပျောက်တတ်သည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ရွှေပန်းပွင့် ဘုရားကပ်လှူပါ။
ဝေးကွာနေသောသူများ၊ ပြတ်တောက်နေသောသူများနှင့် ပြန်လည် ချိက်ဆက်မိမည်။ ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ တစ်ပါးသူအတွက် အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန် လူမုန်း ခံပြီး ဆောင်ရွက်ရသောအနေအထားရှိမည်။ ထင်ရာလုပ် လိုစိတ်များ ပေါ်နေမည်။ စာရွက်စာတမ်း၊ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာများ ဖြေရှင်းရမည်။ သူတစ်ပါးအပေါ် လွန်ကဲစွာ ကူညီစာနာခြင်းကြောင်း ပြဿနာဖြစ်မည်။ ပညာရှာသောသူများ ရည်မှန်း ထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ထွန်းမည်။
ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သကြား ပလာတာ ဒါနပြုပါ။
အရာရာကိုသတိနှင့်ယှဉ်ပြီးလုပ်ပါ။ ပြဿနာအနှောင့်အယှက် အခက် အခဲ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ကြုံမည်။ မိသားစု အိမ်တွင်းရေးများ အညံ့ရှိမည်။ ငွေကုန်များမည်။ သူများပြဿနာအကြား ဝင်ပါရတတ်သည်။ ငွေလက် လွန်တတ်သည်။ ရောင်းမှားဝယ်မှား ဖြစ်တတ်သည်။ ခရီးနှင့်ပတ်သက် သောကံ ကောင်းမည်။ စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းဖြစ်ပြီးမှ အရာရာအဆင်ပြေမည်။ အတွင်းလူ သစ္စာဖောက်တတ်သည်။ အမြဲလက်တွဲခဲ့သောသူတို့နှင့် လမ်းခွဲရမည်။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် ချောကလက် ဒါနပြုပါ။
ယှဉ်ပြိုင်မှုများ အောင်မြင်မည်။ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ အကြောင်းစုံနှင့် ငွေကုန်ခြင်းရှိမည်။ ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု မှားယွင်းတတ်သည်။ မသုံးမဖြစ်၍ သုံးရ ခြင်း၊ မလုပ် မဖြစ်၍လုပ်ရခြင်း၊ မပြောမဖြစ်၍ ပြောရခြင်း ကြုံမည်။ အတတ်ပညာအတွက် ရည်စူးဆောင်ရွက်သူများအဖို့ အရာရာအဆင်ပြေမှု၊ တိုးတက်မှုများ ရရှိမည်။ ယာဉ် ကား အလဲအပြောင်း ပြုရကိန်း ရှိသည်။ ခရီး ကိစ္စ အောင်မြင်မည်။ ကြန့်ကြာနေသည်များ အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်နိုင် မည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ပေါက်ပေါက်တစ် ပွဲဆွမ်းတော်တင်ပါ။
တစ်ခုထက်ပိုသော ဖြစ်လိုခြင်းဆန္ဒများ၊ ရည်မှန်းချက်များ လွှမ်းမိုးနေ ခြင်းကြောင့် အရာရာစိတ်မောလူမောဖြစ်နေမည်။ စရိုက်သဘောသဘာဝ လုံးလုံး လျားလျား မတူညီသူများနှင့် ပူးတွဲဆက်ဆံရသော အခြေ အနေ ရှိမည်။ မှန်းသည်တစ်မျိုး၊ လက်တွေ့တစ်မျိုး ကစဉ့်ကလျားဖြစ် မည်။ အ ပျောက်အရှ များမည်။ အကုန်အကျများမည်။ ဆွေမျိုးမိဘအကြီးအကဲ ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ပင်ပန်းရမည်။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့ တွင် ဒိန်ချဉ် တစ်ခွက် ဒါနပြုပါ။
ကုံရာသီ (ဇန်နဝါရီ ၂၁ မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈)
တွေဝေဒွီဟဖြစ်ခြင်းကြောင့် အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးတတ်သည်။ ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်၍ ရဲရဲရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပါ။ ကြုံတွေ့မည့်အတားအ ဆီး၊ အခက်အခဲ တို့သည် ခေတ္တယာယီသာဖြစ်၍ နိုင်နင်းစွာ ဖြေရှင်းရမည်။ သွေးရင်းသားရင်းများနှင့် ငွေကြေးကိစ္စ စကားပြောရတတ်သည်။ ရင်းနှီးသူများနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ် တတ်သည်။ အသစ်တိုးချဲ့ပြီး ဆောင်ရွက် သော လုပ်ငန်းများမှ အကျိုးကောင်းစွာ ရရှိမည်။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် ထမင်းကြော် ဒါနပြုပါ။
မှန်းသည်တစ်မျိုး၊ လက်တွေ့တစ်မျိုး ဖြစ်မည်။ စိတ်ရှုပ်စရာများ ရှိမည်။ တစ်ပါးသူအတွက် လူမုန်းခံပြီး ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ရကိန်းရှိသည်။ ထူးခြားသောအကြောင်းပေါ်ပြီး ငွေဝင်မည်။ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ရပ်နှင့် ငွေထွက်မည်။ ယာဉ်ကားကိုယ်တိုင်မောင်းသူများသတိရှိပါ။ မူလစီစဉ်ထား သည်တစ်မျိုး၊ လက်တွေ့တစ်မျိုး ဖြစ်မည်။ တစ်ပါးသူအပေါ် ယုံလွယ်လွန်း၍ စိတ်ဒုက္ခရောက်မည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ပေါင်မုန့်သကြားဖြူး၍ ဆွမ်းတော်တင်ပါ။
မေလ ၁၀ ရက်မှ ၁၆ ရက် အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
မေလ ၁၀ ရက်မှ ၁၆ ရက် အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တိုင်းတွင် စောင့်မျှော် ကြည့်ရှု နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, May 10, 2017 No comments:
မေလ ၃ ရက်မှ ၉ ရက် အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
မေလ ၃ ရက်မှ ၉ ရက် အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တိုင်းတွင် စောင့်မျှော် ကြည့်ရှု နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, May 03, 2017 No comments:
မိဿရာသီ (မတ်လ ၂၁ မှ ဧပြီ ၂၀)
မိတ်ဆွေကောင်း တိုးပွားမည်။ အကြီး အကဲများ ထံမှ အထောက် အကူ ရမည်။ လူပန်း စိတ်ပန်း အနှောင့် အယှက် အပြိုင် အဆိုင်များ ကြားမှ အလုပ် ကိစ္စများ ဆောင်ရွက် အဆင်ပြေမည်။ ငွေကြေး စီးပွားတိုး တက်ခြင်းနှင့် အလို ပြည့်စုံခြင်း ကြုံမည်။ အမျိုးသမီး မိတ်ဆွေ အကြီး အကဲ တစ်ဦးထံမှ ရရှိ လာသော အကူ အညီကို လက်ခံ၍ တိုးတက်မှုများ ဖြစ်ထွန်းမည်။ မိသားစု အတွက် ရည်စူးပြီး လုပ်သော လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်မည်။ ချစ်ခြင်း မေတ္တာကို အခြေတည်သော နှလုံးသား ရေးရာ ကိစ္စများကို ရှေ့တိုး ဆုံးဖြတ်မည်။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် ကလးငယ်များအား စာကလေးခွေ ဒါနပြုပါ။
သစ်လွင်သော အကြံအစည် တို့ကို လက်တွေ့အကောင် အထည်ဖော် နိုင်မည်။ ပြဿနာဟောင်းများ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ နေရာအပြောင်းအရွှေ့ ကိစ္စ၊ ခရီး ကိစ္စတို့ အတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်ရန် အခါကောင်း ကျရောက်သည်။ ပေါ်ပေါက် လာသည့် နိုင်ငံခြား ခရီးကံသည် ကိုယ့်အတွက် သာမက မိသားစု အတွက်ပါ အကျိုးရှိမည်။ မရောက်ဖူးသော အရပ်ဒေသများသို့ သွားရာက်ရမည်။ မလုပ်ဖူးသော အလုပ်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဝေးကွာနေသော မိတ်ဆွေများနှင့် ပြန်ဆုံရမည်။
ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သောက်တော်ရေခြောက်ခွက် ကပ်လှူပါ။
ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မည်။ အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်များချ မှတ်ရမည်။ ဘဝအခြေအနေအပြောင်းအလဲနှင့် တိုးတက်မှုရှိမည်။ ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီး ဆောင်ရွက်လိုက်သည်များမှ အကျိုးဆက် ကောင်းများရရှိမည်။ ငွေကြေးအပေးအယူကိစ္စများတွင် သတိနှင့် ဆောင်ရွက်ပါ။ လှည့်စားသူများရှိတတ်သည်။ ကာလရှည်ကြာဆောင်ရွက်ထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုအားအဆုံး သတ်၍ အခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်ရန်အခါကောင်းကျရောက် သည်။ အပြောင်းအလဲ သစ်များအား လက်ခံဆောင်ရွက်ရန် ဝန် မလေးသင့်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကြံရည်ဒါနပြုပါ။
တွေဝေခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် မပြတ်သားခြင်းများကြောင့် အရှုပ်အထွေးများ ဖြစ်တတ်သည်။ စကားများ ရမည်။ ရန် ပဋိပက္ခများနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့မည်။ အမှား အယွင်းများ၊ အခက် အခဲများ ကြုံမည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း တစ်ခုထက် မကသော ကိစ္စများ ဆောင်ရွက် ရလိမ့်မည်။ချက်ချင်း ပြီးမြောက် နိုင်သည့် ကိစ္စ အပေါ် အချိန်ဆွဲ၍ လုပ်ခြင်းကြောင့် အခွင့်ကောင်းများ ဆုံးရှုံးမည်။ ငွေကြး စာရင်းဇယား အရှုပ်အထွေး များကြား ပါဝင် ပတ်သက်ရမည်။ အမှုဖြစ်က ဖြေရှင်းရန် ခက်ခဲမည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္လာနေ့တွင် ကော်ဖီဒါနပြုပါ။
ဆောင်ရွက်သမျှ အောင်မြင်မည်။ အခက်အခဲများကို ပြေလည်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ဥစ္စာဓန တိုးပွားမည်။ အရှုပ်အထွေး များကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ အလုပ်အဆင့် တိုးတက်မည်။ ငွေကြေး ဥစ္စာ တိုးပွားမည်။ လူမျိုးကွဲ အကျိုးပေးမည်။ ဝေးလံသော အရပ်ဒေသမှ သတင်းစကား ကောင်းများကြားသိ ရမည်။ ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်၍ ရှေ့တိုးလုပ်ကိုင်ခြင်းမှ မြင့်မားသောအခြေ အနေတစ်ခုသို့ တိုးတက်မည်။ အလုပ်အဆင့်တိုးတက်မည်။ အရွယ်နှင့်မမျှ အလုပ်တာဝန်များ လွှဲအပ်ခံရမည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ချဉ်ပေါင်ကြော် ဘုန်းကြီး ကျောင်းလှူပါ။
ပုံစံသစ်၊ ဖွဲ့စည်းမှုသစ်များနှင့် ဘဝအခြေအနေသစ်ကို ဦးတည်မည်။ ကာလရှည်ကြာ လူပင်ပန်းစိတ်ပင်ပန်းခံပြီးလုပ်ကိုင်ထားသည်တို့မှ ကောင်းသော အကျိုး ဆက်များ ရရှိမည်။ တစ်ခုထက် မကသော အလုပ်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရမည်။ လုပ်ရိုး လုပ်စဉ်နှင့် မတူ ခြားနား သော လုပ်ငန်းများကို ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက် ရမည်။ နာမည်အောင်မြင်မှုနှင့် ကောင်း သတင်းများ ရရှိမည်။ အများ ကိစ္စများ ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်ရမည်။ အလှူကိစ္စများ ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်။
မေတ္တာရေး ကံကောင်းသည်။ စန်းပွင့်မည်။ လူလွတ်များ အတွက် စိတ်ချမ်းမြေ့ စရာများ ရှိမည်။ အိမ်ထောင်သည်များ သည်ကား သဝန်ကြောင်ခြင်း အခြေ ခံသော အမျက်ဒေါသ များနှင့် ရင်ဆိုင်ရ လိမ့်မည်။ စကားမတည်သော သူများနှင့်တွေ့မည်။ အနှောင့် အယှက် အရှုပ်အထွေး များနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့မည်။ သူတစ်ပါး ပြဿနာများကို ကြားဝင်၍ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းခြင်း မပြုပါနှင့်။ ရုံးရောက်၊ ဂါတ်ရောက် သက်သေ လိုက်ရသည် အထိ ဖြစ်သွားမည်။ လွယ်လင့်တကူ ကတိ မပေးပါနှင့်။ အရပ်ဝေးနှင့် ဆက်သွယ်လုပ် ကိုင်နိုင်သည်။
ယတြာ။ ။ သောကြာနေ့တွင် ပန်းသစ်တော် ဆွမ်းတော်တင်ပါ။
စီစဉ်ထားသည်များ အလွဲလွဲ အချော်ချော်ဖြစ်မည်။ ရည်ရွယ်ချက်တို့ ကိုအကောင် အထည် ဖော်ခြင်း၌ ခက်ခဲနေမည်။ ပြောင်းလဲနေသော အခြေအနေသစ်ကို ဆောင်ရွက်ရန် ဝန်လေးသော သူများနှင့်တွေ့မည်။ ပစ္စည်းပျောက်တတ်သည်။ ရေစပ်၊ ကမ်းစပ်တို့ တွင် အပျော်ဆော့ကစားခြင်း မပြုရ။ အန္တရာယ် ကြီးမား မည်။ အပျော်ကြီးသူ၊ အပျော်ကြူး သူများနှင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်တတ်သည်။ အိမ်ရှိ အသက်ကြီး သူတို့၏ ကျန်းမာရေး အညံ့ရှိမည်။ လက်ဝယ် ရှိသော ပစ္စည်းများ အလေ အလွင့် အပျက် အစီး များမည်။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် ဆီထမင်းဆွမ်းတော်တင်ပါ။
လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ထားသောကိစ္စများကို ဆက်လက်တာဝန်လွှဲ ပြောင်းယူသူတို့၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် စာရွက်စာတမ်းများပျောက် ဆုံးခြင်း၊ အစမှတစ်ဖန် ဆောင်ရွက်ရခြင်းကြုံမည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောငွေဝင်ခြင်းများ ရှိမည်။ ရသင့်ရထိုက်သည်များ လက်ဝယ်ပြန်လည်ရရှိမည်။ အလုပ်နေရာ အပြောင်းအလဲ အတွက် စီစဉ်မှုများအဆင်ပြေမည်။ လမ်းသစ်ထွင်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ အဆင့်မြင့်တိုးတက်မှုများပေါ်ထွန်းမည်။ ပညာသင်တန်းနှင့် ပတ်သက်သည်များ အကျိုးပေးမည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် သပြေပန်းဘုရားကပ်လှူပါ။
တန်ဖိုးကြီးမားသောပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်မသင့်။ ပစ္စည်းလက်ဝယ် ရောက်ပြီးမှ တန်ဖိုးကျဆင်းတတ်သည်။ စက်ပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း များဝယ်ယူက မည်မျှ စနစ်တကျ စစ်ဆေးစေ လက်ဝယ်ရောက်ရှိပြီးမှ ပျက်စီးတတ်သည်။ သံယောဇဉ်မထားသင့်သူကိုထားခြင်း၊ မေတ္တာရေး အရှုပ်အထွေးများဖြစ်တတ်သည်။ မိသားစုတွင် တစ်ဦးပြီးတစ်ဦး ကျန်းမာရေးအညံ့များ ကြုံတတ်သည်။ သုံးစွဲနေသောပစ္စည်းများ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ပျက်စီးတတ်သည်။ ညာခြေ၊ ညာလက်တွင် မတော်တဆ ထိရှတတ်သည်။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် ပေါင်မုန့်ဆွမ်းတော်တင်ပါ။
ဦးတည်ချက် ပြောင်းပါ။ တစ်ဇွတ်ထိုးရှေ့တိုးလုပ်က မှားရုံသာရှိမည်။ ဒုက္ခပေးသည့် မိတ်ဆွေဟောင်းတချို့ကို ကျောခိုင်းရန်သင့်သည်။ ဆက်လက်ပေါင်း သင်းက မိမိ အကျိုး ဆုတ်ယုတ် ရုံသာရှိသည်။ တစ်ပါးသူကြောင့် မိမိ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းတတ်သည်။ တစ်ပါးသူ၏ အိုးအိမ်နေရာ ထိုင်ခင်း ကိစ္စများ လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေး ရမည်။ ကိုယ်တိုင်တွလည်း နေအိမ်ပြုပြင်ခြင်း၊ အသစ်ချဲ့ထွင်ခြင်းများပြုနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအပြောင်း အလဲများ ကြုံမည်။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် ထီးဟောင်း၊ ဖိနပ်ဟောင်း၊ အထည် ဟောင်းစွန့်ပါ။
ရင်းနှီးသူများနှင့် စကားအတိုက်အခံပြောရမည်။ အချစ်ရေးအရှုပ် အထွေးများရှိမည်။ ခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမည်။ နိုင်ငံခြား ခရီးသွား ရမည်။ လူမျိုးကွဲ အကျိုးပေး မည်။ ငွေလိမ် ခံရမည်။ လိမ်ညာသော သူသည် အမျိုးသမီးဖြစ်မည်။ ဆွေမျိုးထဲမှဖြစ်မည်။ အတိတ်ကာလ ပြဿနာဟောင်းများကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရခြင်း ကြုံမည်။ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းများနှင့် ပြန်လည်ဆုံမည်။ ခြံမြေကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စအတွက် စကားပြောဆိုမှုများ အောင်မြင်မည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ပေါက်ပေါက်တစ်ပွဲ ဆွမ်းတော်တင်ပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, April 21, 2017 No comments:
ဧပြီလ ၁၂ ရက်မှ ၁၈ ရက် အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
ဧပြီလ ၁၂ ရက်မှ ၁၈ ရက် အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တိုင်းတွင် စောင့်မျှော် ကြည့်ရှု နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Originally published at - https://www.facebook.com/7daynews
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, April 13, 2017 No comments:
ကုမုဒြာ ဗေဒင် (၄-၄-၁၇ မှ ၁၀-၄-၁၇ထိ)
ငွေကြေးကံကောင်းမည်။ အလုပ်အကြံအောင်မည်။ အခက်အခဲများ ကိုကျော်လွှားနိုင်မည်။ ရန်အားလုံးကိုကျော်လွှားပြီးတိုးတက်မှုရ မည်။ ယခင်နှစ်လဆက်တိုက် စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ခြင်း၊ ငွေကုန်များခြင်းမှ ကင်းလွတ်၍အလုပ်စီးပွားအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်း များအခိုင်အမာရရှိမည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များအခိုင်အမာချမှတ်၍ ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုရမည်။
ယတြာ ။ ။ နှင်းဆီလေးပွင့်၊ နေကြာပန်းနှစ်ပွင့်ကို ဖန်ပန်းအိုး တွင်ထိုးပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်၍ဆောင်ပါ။
လုပ်ငန်းခွင်မှသူများ ရက်ရှည်ရုံးပိတ်ရက်အပြီး လုပ်ငန်းဝန်းကျင်အ တွင်းအပြောင်းအလဲများဆက်တိုက်ဖြစ်မည်။ လုပ်ငန်းသစ်များ ကိုင်တွယ်ရမည်။ လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းများကြုံမည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်သူများကပြား၊ လူမျိုးကွဲများနှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင် ရမည်။ ဝင်ငွေအဆင့်တိုးတက်မည်။ အရေးပါသော ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်း၊ ဈေးကွက်သစ်၊ ကုန်သွယ်မှု မိတ်ဖက်သစ်များနှင့်ဆက်စပ် လုပ်ကိုင်ရမည်။
ယတြာ ။ ။ ကံ့ကော်ရွက်တစ်ရွက်ကို ရွှေချ၊ပလတ်စတစ် လောင်းပြီး ဆောင်ပါ။
အတိုက်အခံများနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့မည်။ အလွယ်တကူဖြစ်သည်ဟူ၍ မရှိ။ တစ်ခုထက်ပိုသောလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရမည်။ အပြိုင်အဆိုင်အ တိုက်အခံများကြားမှ တိုးတက်မှုကိုရှာဖွေရမည်။ မောင်နှမသားချင်းများ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပင် ပန်းရမည်။ လုပ်ငန်းခွင်မှသူများ အလုပ်အဆင့်တိုးတက်မည်။ လုပ်ငန်းအတွင်း ပုံစံပြောင်း၊ မူပြောင်း၍ စနစ်နှစ်နှင့်လုပ်ကိုင်ရမည်။
ယတြာ ။ ။ အပြာရင့်ရောင်ပါသော အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ပြီး လိုရာဆန္ဒပြုပါ။
ကိုယ့်အလုပ်စားပွဲ၊ အလုပ်နေရာများတွင် အရေးကြီးသောစာရွက်စာ တမ်းများ စနစ်တကျသိမ်းဆည်းပါ။ သတင်းပေါက်ကြားခြင်း၊ ဘောက် ချာ၊ ငွေရှင်းတမ်းအစရှိသည်တို့ ပျောက်ရှခြင်း၊ အရေးကြီးသော ဖိုင်တွဲများ၊ မှတ်တမ်းများပျောက်ရှခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထဲမှ မနာလိုသူတို့၏အကောက်ကြံခြင်းကြုံမည်။
ယတြာ ။ ။ ကြွေအင်တုံတစ်ခုအတွင်း ကြာပန်းပင်စိုက်ပျိုးပြီး မိမိအနီးအပါးတွင် ထားရှိပါ။
လုပ်ငန်းဟောင်းများ ရပ်တန့်ရမည်။ ခိုင်မာသော အနာဂတ်သစ်အတွက် ဘဝအခြေအနေကူးပြောင်း၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်မည်။ ဆုံးဖြတ်ထားသောကိစ္စကို ရဲရဲရှေ့ တိုးလုပ်ဆောင်ပါ။ ပင်ကိုကံသဘာဝအရ အမြဲတစေစတင်ဆောင် ရွက်ရာတွင် အနှောင့်အယှက်ရှိသည့် အလေ့အထအတိုင်း ယခုကာ လတွင်လည်း အနှောင့်အယှက်များကြုံပြီးမှ အောင်မြင်မည်။
ယတြာ ။ ။ အုန်းပင်ပေါက်ကို မြေအိုးအတွင်းစိုက်ပြီး မိမိအနီးအပါး တွင်ထားရှိပါ။
သွားလိုသောအရပ်က တစ်ခု၊ သွားရသည့်နေရာကတစ်ခုဖြစ်မည်။ ခရီးမှအပြန် အလှူတစ်ခုသို့သွားရမည်။ အလှူရှင်က တိုက်ရိုက် ဖိတ်ကြားခြင်း မဟုတ်၊ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက အတင်းဖိတ်၍ သွားရ ခြင်းမျိုးဖြစ်မည်။ ထိုအလှူတွင် မိတ်ဆွေဟောင်းနှင့်တွေ့မည်။ ထိုမိတ်ဆွေမှတစ်ဆင့် အလုပ်အခွင့်အလမ်းသစ်ပေါ်မည်။ စီးပွားရေးကိစ္စများ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်အောင်မြင်မည်။
ယတြာ ။ ။ သပြေခြောက်ညွန့်ကို ကြွေပန်းအိုးတွင်ထိုးပြီး အမြင့်တွင်တင်၍ လိုရာဆန္ဒပြုပါ။
အပြောင်းအလဲနှင့် တိုးတက် မှုများ ရှိမည်။ မိသားစု အတွင်း စနေနေ့၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ အင်္ဂါနေ မွေ့းသူများ ရှိက ၄င်းတို့တွင် အလုပ် တိုးတက်ခြင်း၊ စီးပွား ကံကောင်းခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်းများ ရှိမည်။ အထက်ပါနေ့ မွေးနေ့သာ ပြင်ပလူများ၊ သူစိမ်းများနှင့် အလုပ်စီးပွား ဆောင်ရွက်၍ လည်း ကောင်းသော အကျိုးရရှိမည်။ တနင်္လာနေ့၊ ကြာသပတေးနေ့ မွေးသူများ အိမ်တွင် ရှိက ၄င်းတို့ အတွက် စိတ်ပင် ပန်းရခြင်း၊ စိတ်သောက ဖြစ်ရခြင်းများ ကြုံမည်။
ယတြာ ။ ။ အရောင်ခုနစ်ရောင်တွဲစပ်ထားသော သက်တံပုံ ပန်းချီ၊ ဓာတ်ပုံ တစ်ခု ခုကို ဆောင်ပါ။
ယာဉ်သို့မဟုတ် မြေအရောင်းအဝယ်ကိစ္စတစ်ခုခုတွင် အနည်းငယ် သောပွဲခရသည်နှင့်မကာမိ။ ရောင်းမှား ဝယ်မှား ပြဿနာတစ်စုံ တစ်ရာကြုံ၍ ရုံးရောက်၊ ဂါတ်ရောက် ဖြေရှင်းရခြင်းကြုံမည်။ အရှုံးပေါ်ပြီဟုယူဆထားသောအင်္ဂါနံပစ္စည်းများမှ ထူးခြားသော အမြတ်အစွန်းရမည်။ ရပ်တန့်ထားသော လုပ်ငန်းဟောင်းများ ပြန်လည် စတင်ရန် ကြုံမည်။ အိုးအိမ်ကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ စကားပြောဆိုရမည်။
ယတြာ ။ ။ မျက်နှာသုတ်ပဝါအဝါကိုဆောင်ပြီး လိုရာဆန္ဒပြုပါ။
From : ကုမုဒြာဂျာနယ် by စံ- ဇာဏီဘို
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, April 04, 2017 No comments:
စံ-ဇာဏီဘိုရဲ့ မော်ဒန်ဗေဒင် (မတ်လ ၂၄ ရက်မှ ၃၀ ရက် အထိ)
ပဋိပက္ခ အနှောင့် အယှက် များနှင့် ထိပ်တိုက် တွေ့မည်။ စကား အမှန်ကို ပြောသူ ဟူ၍ ကိုယ့်ဝန်းကျင်တွင် မရှိ။ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွား လွယ်သည်။ ဒေါသ အမျက် ဖြစ် လွယ်သည်။ ဒေါသအမျက် ထွက်မှုကြောင့် အမှားများ ဖြစ်ပေါ်မည်။ ရောင်းမှား ဝယ်မှား ဖြစ်မည်။ မတော် တဆ ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်တတ်သည်။ မူလစိတ်ကူး ရည်မှန်းထား သည်နှင့် လက်တွေ့ ဖြစ်ပေါ်မှုတို့ ကွာခြားမည်။ သံယောဇဉ် မထားသင့်သူကို ထားခြင်းကြောင့် စိတ်အနှောင့် အယှက် ကြုံရမည်။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့များတွင် အရှေ့တောင်အရပ်ကို မျက်နှာမူ၍ ဇီးယိုစားကာ လိုရာဆန္ဒပြုပါ။
ဘဝအတွက် အရေးပါသောခြေလှမ်းသစ်များ စတင်ရမည်။ အခက် အခဲများ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ ယှဉ်ပြိုင်လာသူများအပေါ်အနိုင်ယူ စိုးမိုးနိုင်မည်။ ခရီးသွား၍ အကျိုးရှိမည်။ ခြံမြေကိစ္စ၊ နေရာထိုင် ခင်းကိစ္စအတွက် ပြောဆိုဆောင် ရွက်မှုမှန်သမျှအောင်မြင် အဆင်ပြေမည်။ အရပ်ဝေးမှ ကောင်းသောသတင်းစကားကြား သိရမည်။ အလုပ်နေရာ၊ နေအိမ်နေရာ ပြု ပြင်ခြင်းများ ကြုံမည်။ ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့များတွင် သံဃာတော်များကိုလွယ်အိတ် လှူဒါန်းပါ။
ရပ်တန့်ထားသောလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်၍ အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်မည်။ အမှုအခင်းရှိသူများ အမှုနိုင်မည်။ ဆုံးရှုံးထားသည့် ရပိုင်ခွင့်များပြန်လည်ရရှိမည်။ နေအိမ်အနီးအပါး၌ အသံချဲ့စက်နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာရွတ်ဆိုမှုတို့ကို အမျိုးသမီးအုပ်စု တစ်စုမှဆောင်ရွက်သည် ကြုံသော်လွန်စွာကောင်းလှသည်။ စိတ်ငြိုငြင်မှုမရှိသင့်။ ဆုံစည်းရန်မဖြစ် နိုင်တော့ဟုယူဆထားသော သူနှင့် ပြန်လည်ဆုံစည်းမည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များတွင် ဝါးပလွေတစ်ချောင်းကို ရွှေရောင် သုတ်၍ ဖဲကြိုးအနီနှင့် စည်းနှောင်ကာအမြင့်တင်ခြင်းပြုပါ။
ကရကဋ်ရာသီ (ဇွန်၂၂ မှ ဇူလိုင် ၂၂)
အပြိုင်အဆိုင် အတိုက်အခံများကိုကျော်လွှား၍ ထူးခြားသောအောင် မြင်မှုများရရှိမည်။ ကျားလည်း မဟုတ်၊ မ လည်း မဟုတ်သော သူ တစ်ဦးနှင့်ဆက်စပ်၍ အလုပ်အကြံအစည်နှစ်မျိုးဆောင်ရွက် အောင်မြင်ခြင်းရှိမည်။ အတတ်ပညာနှင့် ဘဝအောင်မြင်မှုဖန်တီးနိုင် မည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင်အကြီးအကဲနေရာသို့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရောက်ရှိလာပြီးလုပ်ငန်းကြီးနှစ်ခု လုပ်ကိုင်ရမည်။ ကောင်းသောအကျိုးဆက်များ ရရှိမည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္လာနေ့များတွင် ညောင်ပင်တစ်ပင်အောက် တွင်လိမ္မောသီးတစ်လုံးစားကာ လိုရာဆန္ဒပြုပါ။
ပြဿနာအခက်အခဲများ၊ အပြိုင်အဆိုင်များနှင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ အခက်အခဲများကိုကျော်လွှား၍ အောင်မြင်မှုများရရှိလင့်ကစား ရသင့်ရထိုက်သည်တို့ လက်ဝယ်မရ။ ပေးလျော်သူမရှိသော ထီပေါက်သည့်အလားတူမည်။ ပြဿနာအမြောက်အမြားတာဝန် ယူဖြေရှင်းရန် လွှဲပြောင်းရယူရမည်။စိတ်ဝေဒနာရှင်တစ်ဦးအား ဆေးရုံသို့ လိုက်လံပို့ ဆောင်ခြင်းအား ကူညီရလိမ့်မည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေန့တွင် အိုး၊ အုတ်၊ အစ်အစရှိသော တနင်္ဂနွေနံ ပစ္စည်းများ အလှူဒါနပြုပါ။
အညံ့ကင်း၍ အခက်အခဲအလုံးစုံ အဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက် နိုင်သောအနေအထားကြုံမည်။ သူတစ်ပါးကြောင့် ဖြစ်ပေါ် သောပြဿနာများ တစ်စတစ်စအေးငြိမ်းသွားမည်။ အလုပ်တိုးတက်မည်။ ဝင်ငွေစီးပွားတိုးတက်မည်။ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အဆင့်ဆင့်တိုးတက်ခြင်းရှိမည်။ ဝင်ငွေ တိုးပွားမည်။ ကြံစည်ရည်ရွယ်ထားသောကိစ္စရေးရာမှန်သမျှတို့ လက်တွေ့အောင်မြင်မည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကတွတ်ယို ဘုရားလှူခြင်းပြုပါ။
စိတ်ချမ်းမြေ့စရာများ ပေါ်ထွန်းမည်။ ရည်မှန်းချက်အောင်မည်။ အ ခက်အခဲများကို ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ မေတ္တာရေး ကံကောင်းမည်။ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း အထောက်အကူရမည်။ စုပေါင်းလုပ်ငန်း အကျိုးပေးမည်။ ကာလရှည်ကြာ စောင့်ဆိုင်းနေ သောအခွင့်အလမ်းတို့ကို လက်ခံရရှိမည်။ ပညာရေးကောင်းမည်။ အဆင့်မြင့်အောင်မြင်မှုကိုရမည်။ ကြိုးစားရကျိုးနပ်မည်။
ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သံဃာတော်များအား ဖယောင်းတိုင် ၁၅ တိုင်လှူပါ။
အရည်အသွေးထက်မြက်မည်။ အခက်အခဲအားလုံးကို ကျော်လွှားနိုင် မည်။ ဆိုင်းငံ့ထားသောလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်စတည်ရမည်။ အခက် အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ ခရီးသွား၍ အကျိုးရှိမည်။ ကြိုးပမ်းထားသည်မှ အကျိုးထူးခံစားရမည်။ နေရာအပြောင်း အရွှေ့ကိစ္စဆောင်ရွက်၍ အဆင်ပြေမည်။ ပဋိပက္ခများ ဖြေရှင်းနိုင် မည်။ ငွေကြေးအကုန်အကျများမည်။ အတွေ့အကြုံသစ်များ ရရှိမည်။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် ဘုရားတစ်ဆူ၏ အင်္ဂါထောင့်တွင် ထီးဖြူ ငါးလက်လှူဒါန်းပါ။
အပြီးအပိုင် ဆုံးရှုံးသွားပြီဟု သတ်မှတ်ထားသော ငွေကြေးအခွင့် အရေးတို့ကိုပြန်လည်ရရှိမည်။ ဆုံစည်းရန်မဖြစ်နိုင်ဟုယူဆထားသော သူ နှင့် ဆုံတွေ့မည်။ ရရှိလိမ့်မည်ဟု စိတ်ကူးအိပ်မက်ပင်မရှိသော အခွင့်ထူး၊ တိုးတက်မှုနှင့်ငွေကြေးအခွင့်အလမ်းတို့ကိုရမည်။ စွန့်စား၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများမှ အဆင့်မြင့်အောင်မြင်မည်။ ဖြစ်လိုသော ဆန္ဒများ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုတ် အလှူဒါနပြုပါ။
အခက်အခဲကြားမှ တိုးတက်မည်။ လူမျိုးကွဲ အကျိုးပေးမည်။ အပြိုင် အဆိုင်များကို ကျော်လွှားနိုင်မည်။ ပေါ်ပေါက်လာသော အခက် အခဲပြဿနာမှန်သမျှကို ချက်ချင်းဖြေရှင်းရမည်။ အခြားသူတို့ မရိုးမသား ဆောင်ရွက်ထားသော ငွေကြေးကိစ္စ၊ စာရင်းဇယားကိစ္စ များကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းရမည်။ နီးကပ်လူ ဒုက္ခပးတတ်သည်။ စကားမတည်သူများကြောင့် ရည်မှန်းချက်လွဲချော်မည်။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့များတွင် ကြိမ်ခြင်း၊ ကြိမ်ခုံအဟောင်းများ ရှာဖွေ စွန့်ပစ်ပါ။
စိတ်အနှောင့်အယှက် များမည်။ ရန်အတိုက်အခံများနှင့် ထိပ်တိုက် တွေ့မည်။ လုပ်သမျှနှောင့်နှေးမည်။ သူတစ်ပါးက အလောတကြီးနှင့် ဖြစ်သလိုလုပ်ဆောင်ထားသောကိစ္စများ လက်လွှဲရယူ၍လုပ်ကိုင်ရာမှ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မည်။ ကိုယ့်အလုပ်ထက် သူတစ်ပါးကိစ္စ များ ဆောင်ရွက်ရမည်။ အလုပ်အပေါ်စိတ်မဝင်စားသောသူများနှင့် သာတွေ့မည်။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့များတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ခြေသုတ်ခုံ၊ တံမြက်စည်းတို့ လှူဒါန်းပါ။
အခွင့်အရေးနှစ်မျိုး တစ်ပြိုင်တည်းပေါ်မည်။ ဆိုင်းငံ့ထားသောလုပ် ငန်းများကို ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ငွေကြေးကိစ္စစကားပြောဆို ရခြင်းများအဆင်ပြေမည်။ သူတစ်ပါးနှင့် အယူအဆသဘောထား ကွဲပြားခြင်းများရှိမည်။ ခရီးသွား၍ အကျိုးရှိမည်။ လူမျိုးကွဲများနှင့် ဆက်စပ်၍လုပ်ကိုင်ခြင်းမှ ကောင်းသောအကျိုးရရှိမည်။ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားတတ်သည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့များတွင် အုန်းတစ်ညွန့်၊ ဗုဒ္ဓသရဏံ တစ်ခက်၊ သပြေတစ်ခက်တွဲ၍ ဖန်ပန်းအိုးအတွင်းထိုးကာအမြင့် တင်ပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, March 24, 2017 No comments:
စံ-ဇာဏီဘိုရဲ့ မော်ဒန်ဗေဒင် (မတ်လ ၁၇ ရက်မှ ၂၃ ရက် အထိ)
စုပေါင်းလုပ်ငန်း အကျိုးပေးမည်။ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း အထောက်အကူရမည်။ အခက်အခဲ၊ အတိုက်အခံများ ကျော်လွှားနိုင်မည်။ အရပ်ဝေးနှင့်ဆက်သွယ်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ထူးခြားစွာ တိုးတက်မည်။ ငွေကြေးအပေးအယူကိစ္စတွင် ကြုံတွေ့သောအခက်အခဲများကိုပယ်ရှားနိုင်မည်။ ကျန်းမာရေးအထူးသတိရှိရမည်။ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးများကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ ကြုံတွေ့နေသော အခက်အခဲများကိုကူညီသူ ပေါများမည်။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့များတွင် အိမ်ရှိဆားထည့်သောခွက်ကို အသစ်အစားထိုး သုံးစွဲပါ။
ခရီးသွား၍ အကျိုးရှိမည်။ လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမည်။ အရပ်တစ်ပါးနှင့်ဆက်စပ် သောလုပ်ငန်းများမှ အဆင့်မြင့်သောအကျိုးဆက်များရရှိမည်။ သူတစ်ပါးနှင့်မတူသော အတွေးအခေါ်များနှင့် အလုပ်အကိုင်စီးပွားကိစ္စများကို လုပ်ကိုင်နိုင်မည်။ ပစ္စည်းပျောက်တတ်သည်။ ငွေကြေးလက်လွန်တတ်သည်။ မိန်းမချင်းမနာလိုမှုများ ဂရုစိုက်ရမည်။ ဆွေမျိုးနှင့်ပဋိပက္ခဖြစ်တတ်သည်။
ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့များတွင် မျောက်တို့အား ငှက်ပျောသီးကျွေးပါ။
ငွေအစုလိုက်ဝင်မည်။ အပြိုင်အဆိုင်များကိုကျော်လွှားနိုင်မည်။ သူတစ်ပါးနှင့် မတူသောရှုထောင့်မှ လုပ်ကိုင်၍အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ကောင်းပေါ်ထွန်းမည်။ မေတ္တာရေး ကံကောင်းမည်။ အလုပ်အကြံအစည်တစ်ခု ပြီးမြောက်ခြင်းမတိုင်မီ အခြားလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုလုပ်ရန် အခြေအနေအခွင့်ကောင်းသစ်ပေါ်မည်။ ဝင်ငွေတိုးပွားခြင်းနှင့် ဘဝအခြေအနေ မြင့်မားခြင်းများဖြစ်ပေါ်မည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များတွင် မီးချောင်းအကျွမ်းအပျက်များရှာဖွေ၍ စွန့်ပစ်ပါ။
မှန်းသည်နှင့်လက်တွေ့ကွာခြားနေမည်။ အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစနှင့် တိုးတက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်မည်။ အနီးကပ်လူယုံ ဒုက္ခပေး မည်။ ရည်မှန်းထားသည်နှင့် လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်တို့ ကွာခြားမည်။ ပေါ်ထွန်းထားသောစိတ်ကူးတို့ကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရန်သင့်သည်။ တွက်ဆထားသည်နှင့် ဖြစ်ပေါ်မှုတို့လွဲချော်လင့်ကစား အလိုရှိသလိုဆောင်ရွက် အဆင်ပြေမည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္လာနေ့များတွင် ငါးပတ်မွှေဟင်းချက်၍ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအား ဒါနပြုပါ။
အကြံအစည်သစ်တို့ကို လက်တွေ့အသုံးချသင့်သည်။ အခက်အခဲတို့ကို ဖြေရှင်းနိုင် မည်။ ဦးတည်ချက်ပြောင်း၍ ဆောင်ရွက်သည်များမှ အဆင့်မြင့်အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ထွန်းမည်။ ငွေကြေးမြှုပ်နှံမှုသစ်များဆောင်ရွက်ရန်အခါသင့်သည်။ နေရာအပြောင်းအရွှေ့အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းသစ် အတွက်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရန်အခါသင့်သည်။ တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်နေသောကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် သာသနာ့အဆောက်အအုံတို့တွင် အုတ်ခဲဒါနပြုပါ။
အပြိုင်အားလုံးကိုကျော်လွှား၍ အဆင့်မြင့်တိုးတက်မှုကိုရရှိမည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဆောင်ရွက်လိုက်သောလုပ်ငန်းနှစ်ခုမှအောင်မြင်ခြင်းကို ကြုံမည်။ အလုပ်အကြံအစည်တစ်ခုကို အဆုံးမသတ်မီအခြားသောလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရလိမ့်မည်။ စာချုပ်စာတမ်းများကို ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုရမည်။ ပျက်ယွင်းနေသောကိစ္စများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ အမှုပြဿနာများ အနိုင်ရရှိမည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ညောင်ပင်အောက်တွင် သန့်ရှင်းရေးပြုခြင်း၊ ညောင် ထောက်ခြင်းပြုပါ။
မှန်းထားသည်နှင့်လက်တွေ့ ကပြောင်းကပြန်နှင့်စီစဉ်ထားသည်များ ပျက်ယွင်းတတ် သည်။ အတွင်းလူ ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ မလွှဲမရှောင်သာ၍ သူတစ်ပါးအတွက် ကြားဝင်အာမခံခြင်း၊ တာဝန်ယူခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်။ အားနာမှုနှင့် စိတ်ကောင်း စေတနာထားခြင်းအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူ၍ ဒုက္ခပေးသူပေါ်မည်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်တို့ကို ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်သင့်သည်။
ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့များတွင် သံဃာတော်များကို လက်ဖက်ခြောက်ဒါနပြုပါ။
မတော်တဆထိခိုက်မှုအန္တရာယ် အထူးပြုဂရုစိုက်ပေးပါ။ ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများ ဆိုင်းငံ့ရပ်တန့်ရလိမ့်မည်။ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စကိုအခြေတည်၍ ဘဝ အဆင့်နှင့် အလုပ်အခြေအနေအောင်မြင်မှုများဖြစ်ထွန်းမည်။ ကိုယ့်အပေါ်ယုံစား၍ လုပ်ငန်းငွေကြေး လွှဲအပ်သူများကြုံမည်။ နေရာအပြောင်းအရွှေ့နှင့် တိုးတက်မှုများ ဆောင်ရွက်ရန်အနေအထားကောင်း ကျရောက်မည်။ အနက်ရောင်သုံးစွဲခြင်းကို ရှောင်ပါ။
ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် ကြံရည်တစ်ခွက်ကို ၂၃ ကြိမ်ငုံပြီးသောက်ပါ။
အခက်အခဲနှစ်မျိုး ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ မရောက်ဖူးသော အရပ်ဒေသသို့ လှည့်လည် သွားလာရမည်။ ပြောင်းလဲ၍တိုးတက်ခြင်းများရှိမည်။ အရပ်ဝေးမှကောင်းသော သတင်းစကားများ ကြားသိရမည်။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် မဟုတ်သော လုပ်ငန်းများရှေ့ တိုးလုပ်ကိုင်နိုင်မည်။ ရောင်းမှားဝယ်မှားဖြစ်တတ်သည်။ မိသားစုအရေးကိစ္စများ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရလိမ့်မည်။ လူမျိုးကွဲကပြားများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်သော ကိစ္စများအကျိုးထူးရမည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် လေတိုက်လျှင်လည်ပတ်နေသော စကြာပုံ ဝယ်ပြီးအိမ်ရှေ့တွင်ထားပါ။
မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတိုးပွားမည်။ ရည်မှန်းချက်သစ်အောင်မြင်မည်။ အပြောင်းအလဲနှင့်တိုးတက်မှုကိုရရှိမည်။ ဦးတည်ချက်သစ်ကို ပြောင်းလဲ၍ လုပ်ကိုင်ရန်အနေအထားကောင်းကြုံမည်။ ကိုယ်ပိုင်ဆုံး ဖြတ်ချက်နှင့်ရှေ့တိုး လုပ်ကိုင်ခြင်းမှ အောင်မြင်သောအနေအထားကောင်းကိုကြုံမည်။ အပြိုင်အဆိုင်အားလုံးကို ကျော်လွှား၍ အလိုဆန္ဒနှင့်ရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် ရယ်မောပျော်ရွှင်နေသော အန်းကုံးပုံကိုမိမိအနီးအပါး တွင်ထားပါ။
စကားမတည်သူများနှင့် တွေ့မည်။ အပြိုင်အဆိုင်များ၊ အခက်အခဲများနှင့် ကြုံမည်။ ငွေကုန်များမည်။ ငွေစုရန်ရည်စူးက ပို၍ကုန်မည်။ ပစ္စည်းပျောက်မည်။ လူမှုရေးတွင်အတိုက်အခံရှိမည်။ စကားမတည်သူများနှင့်တွေ့မည်။ သစ္စာမဲ့သူများနှင့်ကြုံမည်။ ပြဿနာများ၊ အတိုက်အခံများကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်၍ ဖြေရှင်းအဆင်ပြေမည်။ စာရွက်စာတမ်းလက်မှတ်ထိုးခြင်း၊ ငွေကြေး ကိစ္စတာဝန်ယူခြင်း၊ အာမခံခြင်းမပြုရ။
ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် အင်္ကျီအသစ်စက်စက်တစ်ထည်ဝတ်ဆင်ပါ။
အခက်အခဲမှန်သမျှကျော်လွှား၍ ရည်မှန်းချက်သစ်တို့ကိုလက်တွေ့အကောင် အထည်ဖော်နိုင်မည်။ အပြိုင်အဆိုင်ကြားမှ တိုးတက်မည်။ ဦးတည်ချက်သစ်နှင့် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းတို့မှ အောင်မြင်မည်။ ငွေဝင်မည်။ လုပ်ငန်းမရှိသူ လုပ်ငန်းရရှိမည်။ လုပ်ငန်းရှိသူများ အဆင့်တိုးခြင်းနှင့်ငွေကြေးကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း များအောင်မြင်မည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှ အကျိုးအမြတ်ကောင်းစွာရရှိမည်။
ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ချိုချဉ် ၁၄ လုံးကို ကလေးသူငယ်များကို ဝေငှကျွေးပါ။
ကုမုဒြာ ဗေဒင် ၇-၃-၂၀၁၇ မှ ၁၃-၃-၂၀၇
အနှောင့်အယှက် အတိုက်အခံအားလုံးကိုကျော်လွှား၍ အလုပ်စီးပွားများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်။ အများကိစ္စ၊ အဖွဲ့အစည်းကိစ္စများ တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ရလိမ့်မည်။ ငွေကြေးဥစ္စာစီးပွား တိုးပွားမည်။ အမည် အတွင်း တနင်္လာနံ၊ စနေနံအတွဲများပါသော ထွန်းကျော်၊ ခိုင်ခိုင်နွယ် အစရှိသူများနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်မည်။ အပျက်အစီး အပျောက်အရှ များမည်။ သံယောဇဉ်မထားသင့်သူအားထားခြင်း ၊ အချစ်မှားခြင်းများ ဖြစ်မည်။
ယတြာ ။ ။ ခရမ်းရောင်သစ်ခွပန်းများ မိမိနံဘေးတွင် စိုက်ပျိုးထားရှိပါ။
ငွေကုန်ကြေးကျများမည်။ ကာလအတန်ကြာ စုဆောင်းထားသောငွေများကို တစ်ပြိုင်နက် အသုံးချရခြင်း ကြုံမည်။ ကိုယ့်အတွက် ကုန်ကျခြင်း မဟုတ်။ အလေအလွင့် အပျောက်အရှ များမည်။ တစ်ပါးသူကတိပျက်၍ ဆောင်ရွက်ရသောကိစ္စများ ပျက်ယွင်းမည်။ ဘီးနှစ်ဘီးပါသော ယာဉ် ပစ္စည်း လာရောက် ပေါင်နှံအပ်နှံခြင်းများပြုက လက်မခံရ။ ရွှေလိမ်ခံရတတ်သည်။ လူလိမ်လူ ညာများနှင့် ဆက်တိုက်တွေ့ရတတ်သည်။
ယတြာ ။ ။ စတီးပန်းအိုး အတွင်း အရောင်မတူ ကျောက်စရစ်ခဲ နှစ် ခဲထည့်ပြီး ကာနေးရှင်းရောင်စုံထိုးပါ။
သီးသန့်တစ်ဦးတည်း မည်မျှနေလိုသည်ဖြစ်စေ နေလို့မရဖြစ်မည်။ ဧည့်ခံပွဲများသို့ တက်ရောက်သွားလာရခြင်းများရှိမည်။ ဘာသာရေးပွဲများ သွားရောက်ရမည်။ အိမ်မွေး သတ္တဝါတို့အတွက် စိတ်သောက ဖြစ်ရတတ်သည်။ ထူးခြားသောလုပ်ငန်းတာဝန်များ လက်ခံဆောင်ရွက်ရမည်။ မမျှော်လင့်ဘဲ နာမည်ကောင်း ရခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်မည်။ ပညာရေးကိစ္စတွင်လည်း ထင်ရှားသော အောင်မြင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်မည်။ စနေနံ (ထီး၊ ဖိနပ်၊ အ ဝတ်၊ ဦးထုပ်) များ ကျန်ရှိက ချက်ချင်းပြန်ယူပါ။
ယတြာ ။ ။ ငါးရုပ်ပုံ မျက်နှာသုတ်ပဝါတစ်ထည် ဝယ်ယူသုံးစွဲပါ။
အတိုက်အခံများ၊ အနှောင့်အယှက်များကြားမှ ရည်ရွယ်ချက် အလုံးစုံတို့ကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိမည်။ အခက်အခဲများကြားမှ အောင်မြင်မှုအဆင့်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်မည်။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ရမည်။ တစ်ပါးသူကိစ္စများ လိုက်လံဆောင်ရွက်ရင်း မိမိအတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်များ၊ ရန်အတိုက်အခံ များနှင့် ကြုံတွေ့မည်။ စနေနေ့မွေးသောသူများ ကောင်းလျှင် အလွန် ကောင်းသလိုဆိုးလျှင် အလွန်ဆိုးသည်။ အလုပ်အကိုင်များ အထင်အရှား အဆင်ပြေမည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူများမှ ထူးခြားသော အထောက်အကူ များ ဖြစ်လိမ့်မည်။
ယတြာ ။ ။ လေတိုက်လျှင် လည်ပတ်နေသောစကြာပုံဝယ်ယူပြီး အိမ်ရှေ့ ဝန်းကျင်တွင်ထားရှိပါ။
မိသားစုအလုပ်စီးပွားများ ထူးခြားစွာတိုးတက်မည်။ အိုးအိမ်ကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်အောင်မြင်ခြင်းနှင့် အလိုဆန္ဒ ရည်မှန်းချက်တို့ ပြည့်ဝအောင် ဖန်တီးနိုင်မည်။ မြောက်အရပ်၊ အရှေ့မြောက် အရပ်တို့နှင့် ဆက်နွှယ်၍ ဆောင်ရွက်သော ကိစ္စရေးရာအဖြာဖြာတွင် ကောင်းသောအကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်းနှင့် အလိုပြည့်စုံခြင်းရှိမည်။ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်အိုမင်းသော သံဃာတစ်ပါးကြွရောက် အလှူခံလိမ့်မည်။ အလွန်ကောင်းသောနိမိတ်ဖြစ်ပေရာ တတ်အား သမျှ အလှူဒါနပြုပါ။
ယတြာ ။ ။ ကျောက်စရစ်ခဲ ခြောက်ခဲကို ရွှေရောင်သုတ်၍ ယွန်းဘူး တစ်ခုအတွင်း ထည့်ထားခြင်းပြုပါ။
အမှုအခင်းပြဿနာအခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နိုင်သည်။ ဒုက္ခရောက်နေသော ကြာသပတေးနေ့မွေးသူများနှင့် ကြုံရမည်။ လိမ်ညာလှည့်စားသော ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူ၏ ဒုက္ခပေးခြင်းကို ကြုံရပေမည်။ ကြားဝင်တာဝန်ယူ အာမခံထားသည့် ကိစ္စများတွင် မျက်နှာပျက်စရာအကြောင်းများနှင့် စိတ်ပျက်ရခြင်းမျိုး ရှိသည်။ အိုးအိမ်အသစ်၊ နေရာထိုင်ခင်းအသစ် ပြုပြင် တိုးချဲ့ ပိုင်ဆိုင်ရရှိပေအံ့။ ခြံ၊ ကား၊ အခန်းနှင့်ပတ်သက်၍ စကားများ ဖြေ ရှင်းရမည်။ စက်ပစ္စည်းများကို သတိနှင့် ဆောင်ရွက်ပါ။
ယတြာ ။ ။ မြေပန်းအိုးအတွင်း ထိကရုန်းပင်အလှ စိုက်ပျိုးထားပါ။
မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း အထောက်အကူရမည်။ စုပေါင်းလုပ်ငန်း အကျိုးပေးမည်။ အလုပ်မရှိသူ အလုပ်ရခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်ထွန်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်မည်။ အခက်အခဲ များကို ကျော်လွှားနိုင်မည်။ စိတ်ဓာတ် တက်ကြွနေမည်။ ငွေဗကြး အကုန်အကျ များမည်။ ငွေကြေးအတွက် စကားများရတတ်သည်။ ရွှေထွက်ကိန်းရှိသည်။ လူဝင်လူထွက် ရှုပ်ထွေးမည်။ ခြေလေးချောင်း သတ္တဝါဝင်က လူထွက်ကိန်းရှိသည်။ အကြီးအကဲ ဆရာသမားများ၏ အထင်လွဲခံရမည်။ အချစ်ရေး၊ မေတ္တာရေးတွင် အရှုပ်အထွေးများ ကြုံ နိုင်သည်။
ယတြာ ။ ။ အုန်းပင်တစ်ပင်ကို ကျောမှီပြီး ကိုယ်တိုင်ဓာတ်ပုံရိုက်၍ ဆောင်ပါ။
ဦးတည်ချက်ပြောင်း၍ ဆောင်ရွက်သောကိစ္စများမှ ထူးခြားသော အောင်မြင်မှုများ ရလာမည်။ ရန်အနှောင့်အယှက်အားလုံးကို ကျော်လွှား၍ အလိုဆန္ဒမှန်သမျှ ပြည့် ဝအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ ယာဉ်၊ ကားမောင်း နှင်မှုများ သတိရှိရမည်။ ရွှေအဝင်မတော်၊ မြေပေါင်ခံခြင်း၊ ရွှေပေါင်ခြင်းများ လက်မခံရ။ အလိမ်အညာခံရတတ်သည်။ အရှေ့မြောက်အရပ်မှ ကောင်းသောသတင်းစကား ရရှိမည်။ ကိုယ်တိုင်တွင်လည်းကောင်း၊ မိသားစုတွင်လည်းကောင်း ခြံ၊ မြေ အဝင်မတော်။
ယတြာ ။ ။ သစ်သီးကိုးလုံးကို နေအိမ်အရှေ့အရပ်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းသို့သွားရောက်လှူဒါန်းပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, March 08, 2017 No comments: